ဖလော်ရီဒါဆေးခြောက်ဥပဒေရှေ့နေ - မစ္စတာဆေးခြောက်ဥပဒေ - Dustin Robinson
PodCast တွင်နားထောင်ပါသို့မဟုတ် YouTube ပေါ်တွင်ကြည့်ပါ ဖလော်ရီဒါဆေးခြောက်ဥပဒေများ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သောဖလော်ရီဒါဆေးခြောက်ရှေ့နေအတွက် - လည်ပတ်ရန် Mr. Cannabis Law, Dustin Robinson, သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Cannabislaw.com
"ဖလော်ရီဒါဆေးခြောက်ဥပဒေများ" ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင်ဆေးခြောက်ဟုတရားဝင်ခေါ်သောဆေးခြောက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးလိပ်မသောက်ရသေးသောလူအများအပြားကအိုမင်းခြင်းနှင့်ရှေးရိုးစွဲလူ ဦး ရေခံစားနေရခြင်းမှခံစားကြရသည်။ ဖလော်ရီဒါတွင်လူနာပေါင်း ၃၀၀,၀၀၀ ခန့်ပါ ၀ င်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်အစီအစဉ်ရှိသည်။ ဖလော်ရီဒါရှိဆေးခြောက်ကိုအပြည့်အ ၀ တရားဝင်လိုက်ခြင်းသည်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဥပဒေပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါမဲပေးမှုအစီအစဉ်မှပေါ်ပေါက်လာဖွယ်ရှိသည် - ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ဖလော်ရီဒါရှိဆေးခြောက်တရားဝင်မှုအတွက်မဲပေးရန်ရှာဖွေပါ။
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Florida မှာဆေးခြောက်ဥပဒေတွေအကြောင်းပြောနေတာပါ။ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့်နာမည် Tom Howard ။ သင်တစ်စုံတစ်ရာလိုအပ်ပါကသင်သည် Google Cannabis Lawyer ကိုရှာပြီးကျွန်ုပ်ကိုရှာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အထူးအထူးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ ငါတို့အားလုံးဖလော်ရီဒါဆေးခြောက်ဥပဒေများနှင့်ပတ်သက်ပြီး Dustin Robinson နှင့်ပြောမည်။ Dustin, ငါတို့နှင့်ပူးပေါင်းသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဖလော်ရီဒါဆေးခြောက်ရှေ့နေ - Dustin ရော်ဘင်ဆင်
ဟုတ်တယ်၊ ဘယ်အခန်းကဏ္howကနေသင်သိတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့သည်အစောပိုင်းကထက်အများကြီးပိုကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်နေကြသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကသင့်ကိုကမ်းခြေပြပွဲတစ်ခုမှာကမ်းခြေတစ်ခုရှိရင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်။ သငျသညျ Dustin မှလာဘယ်မှာလဲ
ငါဒီမှာဖလော်ရီဒါကိုရောက်နေတယ် တောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါမှာနေပါတယ် ဒီမှာရာသီဥတုသာယာတယ်
ဒါကြောင့်ငါကဒီမှာရှိနေသကဲ့သို့သားမွေးစီတန်းဘောင်းဘီကိုဝတ်ဆင်မဟုတ်ပါဘူး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအပြင်ဘက်မှာ 25 ဒီဂရီကဲ့သို့ဖြစ်၏။
မဟုတ်ပါ၊ လှတယ်။ မနေ့ကငါလှေပေါ်ထွက်လာတယ် ဒီနေ့အလုပ်နေ့ပါပဲ ညာဘက်ပြတင်းပေါက်မှလှပသောနေရောင်ခြည်။
ကျနော်တို့ဖလော်ရီဒါမှာသွားမတူညီတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးရှိတယ်, သိသာလျှော်ဘက်ခြမ်းအပေါ်ဖြစ်ပျက်ကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယရေတွက်။ ကျနော်တို့ဆေးခြောက်ဘက်မှာပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးရရှိပါသည်။ ဒီမှာဖလော်ရီဒါမှာအနည်းငယ်အမြန်သမိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဝေါ်သောအရာများစွာကိုလိုင်စင်ချထားသည် ဤနေရာတွင် MMTCs ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ကုသရေးစင်တာများရှိသည်။ ဤရွေ့ကား, ဒီမှာဖလော်ရီဒါအတွက်ဒေါင်လိုက်ဘက်ပေါင်းစုံလိုင်စင်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုကျန်းမာရေးဌာနမှလိုင်စင်ချထားသည်။ ပြီးတော့အဲဒီနောက်မှာတော့ဖလော်ရီဒါမှာတရားစွဲမှုအတော်များများရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်အခုအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာလိုင်စင်ရသူ ၂၂ ယောက်ရှိပြီးအများစုမှာဒီလိုင်စင်အများစုကို [crosstalk 22:00:01] ရဲ့အပြင်ဘက်မှာအခြေချရေးသဘောတူညီချက်များမှတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအီလီနွိုက်ပြည်နယ်မှာသူတို့ကပြည်နယ်ကိုတရားစွဲဖို့ဘယ်လိုဘတ်ဂျက်ဆွဲသင့်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါသဘောတူညီချက်တွေအများကြီးလိုင်စင်အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်ရှိမရှိစဉ်းစားမိပါတယ်?
ဟုတ်တယ်၊ ကောင်းပြီ၊ ငါကလိုင်စင်လုပ်ပေးတဲ့မည်သည့်ပြည်နယ်ကမှတရားစွဲဆိုခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုခွဲဝေချထားရမယ်လို့ငါပြောလိမ့်မယ်။ ငါမစ်ဆူရီရုံသူတို့ရဲ့ဆုရရှိသူကြေညာခဲ့သည်ငါသိ၏။ ငါမစ်ဆူရီ application များနှင့်ကောင်းသောလျှောက်လွှာစာရေးဆရာများနှင့်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်၊ သူတို့သည်၎င်းတို့ကိုရေးဆွဲသောအခါ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားအရေးယူဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်းကိုသူတို့အတိုင်းအတာအထိယူဆောင်လာနိုင်စေရန်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားသည်။ လိုင်စင်မရဘူး တကယ်တော့ဒါကလူအများအသုံးပြုတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုပါ။ ဒီမှာဖလော်ရီဒါမှာလိုင်စင်ကိုအရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။ ငါဆိုလိုသည်မှာ
ဟုတ်တယ် ဒါဆိုမင်းရလိမ့်မယ် ... စက္ကူအပိုင်းအစသည်ဒေါ်လာသန်း ၆၀ ဖြင့်ရောင်းနေသည်။ ဒါကမရှိ, အိမ်ခြံမြေမရှိစစ်ဆင်ရေးမရှိ။ ဒါကြောင့်လိုင်းအများကြီးရနေတဲ့အတွက်ဒီဒေါ်လာသန်း ၅၀ လိုင်စင်ရဖို့လူတွေကရှေ့နေစရိတ်ဒေါ်လာ ၁ သန်းပေးရတာကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူး။ အခြားပြည်နယ်များတွင်လိုင်စင်၏တန်ဖိုးသည်မြင့်မားမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်စက္ကူတန်ဖိုးဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ (သို့) တစ်သန်းရှိသည်ဆိုပါစို့၊ သင်သည်ရှေ့နေရာနှင့်ချီ။ တရားစွဲဆိုမှုအတွက်ပေးဆပ်ရန်မလိုတော့ပေ။ ဒါပေမယ့်လိုင်စင်ကသန်း ၅၀ တန်တယ်ဆိုရင်၊ မင်းကဘာကိုသိလဲ၊ တခါတရံမှာအခြားသူတွေကအခွင့်အလမ်းတွေကိုတွေ့တဲ့တရားစီရင်ရေးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေကြတယ်။
မြဲမြဲကိုင်ထားသည်။ ထိုမျှမက ... မဟုတ်ဘူး, သော verity မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာလဲ၊ စောင့်ပါ ဦး ။ champerty က champerty ပါ။ ကံမကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဟာလျှို့ဝှက်ဥပဒေရေးရာဝေါဟာရအချို့ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်လူတွေဟာမင်းကိုအဲဒီလိုလုပ်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။ ၎င်းသည်တရား ၀ င်အရာ၊ ကောင်းပြီ၊ သီအိုရီအရ Champerty ကိုမင်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အဝေးကပါတီရဲ့ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်တာနဲ့တူတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပါပဲ။ သို့သော်၎င်းသည်တရားစွဲဆိုမှုနှင့်ဆက်နွှယ်မှုမရှိသောအခြားသူတစ် ဦး ဦး ကငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားရှိသည့်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏အခြေခံအားဖြင့်တူညီသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါနဲ့သူတို့ဖလော်ရီဒါမှာသူတို့ champerty ခွင့်ပြုပါပုံရသည်?
ငါတကယ်တော့အဲဒီဝေါဟာရကိုတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့်ဆိုလိုတာကတစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်မှာလူတွေဟာတရားစွဲမှုတွေရှိတတ်တယ်၊ သူတို့ကသူတို့ကိုငွေကြေးမပေးနိုင်ဘူး၊ တခြားလူတွေကတစ်ခုခုအတွက်လဲလှယ်ရေးအတွက်တရားစွဲဖို့ငွေကြေးလာကြတာများတယ်။ ဒီတော့ yeah ငါ champerty အရာဖြစ်ကောင်းဒီအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်သည်ထင် -
ဒါပေမယ့်ဒါဆိုရင်မင်းကအပြင်ကိုထွက်ပြီးလူတွေကိုတရားစွဲဆိုဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်မတော်မလျော်ပြုမူမှုအချို့ရှိမယ်လို့သင်ထင်သလား။ ၎င်းသည်၎င်းရည်မှန်းချက်ကိုရည်မှန်းထားခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားတရားစွဲဆိုမှုပြုလုပ်လိုသည့်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့မှာဒေါ်လာ ၁ သန်းလောက်သုံးဖို့အရင်းအနှီးမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ ၀ င်လာပြီးရှယ်ယာအချို့အတွက်လဲလှယ်မှုအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ဆန္ဒရှိကြတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကလိုင်စင်ရပြီးဒေါ်လာ ၅၅ သန်း၊ ၆၀ မီလျံနဲ့ပြန်လှန်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်အခုသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ မကြာသေးမီကလိုင်စင်အသစ်ရှစ်ခုကိုအခြေချပြီးထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ သူတို့ကတစ်ခုထောက်ပြလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကန ဦး လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တစ်မှတ်အတွင်းသွင်းယူသူတွေကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့မှာလိုင်စင်ရရှစ်ယောက်ရှိပြီး ၂၂ ခုကတော်တော်လေးအသစ်ဖြစ်နေပြီးသူတို့ဟာဒေါင်လိုက်ဘက်ပေါင်းစုံထားတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ဖို့အရင်းအနှီးကိုရှာဖွေနေတယ်။ [crosstalk 1:55:60] ဒေါ်လာသန်း ၂၀ လောက်ကုန်ကျတယ်။
ဒေါင်လိုက်ပြောလိုက်တာနဲ့သင်ကသူတို့ကြီးထွားတယ်၊ သိုတယ်၊ သိုလှောင်တယ်၊ သူတို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်တယ်၊ ဆိုလိုတာကအားလုံးပဲ။ ထိုဖလော်ရီဒါအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံပါပဲ။
ဟုတ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဖလော်ရီဒါမှာအရူးလုပ်တာကသူတို့လုပ်ရမယ်၊ ကြီးထွားဖို့၊ ပြုပြင်ဖို့၊ တဖန်သင်တို့ကြောင်းမဆိုထွက်ကျုံ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေသောပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများရှိသည်ကဲ့သို့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုချင်းစီကို entity တစ်ခုချင်းစီကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အနီးအနားမှာအိမ်နီးချင်း ၂ ယောက်ရှိရင်ဒီလောက်မတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့သင်ထင်မိနိုင်တယ်။ တစ်ခုကဆေးခန်းမှဆေးခန်းတစ်ခု၊ တစ်ခုကအခြားဆေးခန်းမှမှာယူသည်။ သင်ကားအနီးတွင်ကပ်ရန်ကား ၂ စီးစီးလာသည်။ ထိုဆေးခန်းနှစ်ခုစလုံးမှကားတစ်စီးတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သောဝန်ဆောင်မှုရှိပါက ပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မလုံလောက်စရာအချို့ရှိပါတယ်။ နောက်လာမယ့်ဥပဒေပြုအစည်းအဝေးမှာဥပဒေကြမ်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးသူတို့တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ဖလော်ရီဒါတရားရုံးချုပ်ရှိတယ်။ ဒီတော့အောက်တရားရုံးတွေကဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုငါတို့ဖလော်ရီဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လို့ယူဆတယ်။
ဒါဟာအနောက်ဗာဂျီးနီးယားနဲ့တူတံပိုးမှုတ်သောအခါ။ အနောက်အနောက်ဗာဂျီးနီးယားမှာငါတို့ပြောနေကြတာ။ မင်းပန်းပွင့်မရနိုင်ဘူး၊ စပျစ်သီးတွေတောင်မှမရနိုင်ဘူး၊ ဒါဖလော်ရီဒါကိုဘယ်လိုစခဲ့လဲ မင်းပန်းပွင့်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလား
ဟုတ်တယ် ဒီတော့ဖလော်ရီဒါ၊ ငါ West Virginia အက်ပလီကေးရှင်းကိုအခုလက်ရှိလုပ်နေတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါကအနောက်ဗာဂျီးနီးယားရဲ့ပုံစံပဲ။ ထိုအဟုတ်, ဖလော်ရီဒါအလွန်, အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အနိမ့်ဆေးများနှင့်သာစတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပဲ။ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်သည်အခြေခံအားဖြင့်ဤ MMTC များသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ကုသမှုစင်တာများသည်ကြီးထွား၊ ဒါကြောင့်အဲဒီစကားလုံးသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖလော်ရီဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၌တည်၏။ ထို့နောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ဥပဒေပြုသူကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုပြဌာန်းရန်သွားသောအခါ၎င်းတို့ကိုခေါ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကြီးထွားမှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စွန့်လွှတ်မှုများနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
တွဲဖက်နှင့်မဖြစ်မနေအကြားခြားနားချက် permissive နှိုင်းယှဉ်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုကတွဲဖက်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ခေါ်တာကိုမသေချာဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီတရားရုံးအမှုအကြောင်း၊ [inaudible 00:07:38] အကြောင်းနဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ရပါတယ်။ "အိုး၊ အရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်။ ငါတရားဝင်ပစ္စည်းပစ္စယသိရန်မလိုအပ်ပါ။ " ငါက "မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါအရမ်းကိုရိုးရှင်းတယ်။ ၎င်းသည်တစ်ခုနှင့် or အကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်စကားလုံးကိုအသုံးပြုသည် (သို့) ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အဆိုပါဖလော်ရီဒါပညတ်တော်သည်လာ။ စကားလုံးကိုအသုံးပြု။ ဆိုလိုတာက entity ကအခြေခံအားဖြင့်အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ " ဒါကြောင့်အခုဖလော်ရီဒါတရားရုံးချုပ်ကဒီကိစ္စကိုကိုင်တွယ်နေပြီးဒီအုပ်ချုပ်ရေးကိုအတည်ပြုပြသနေတဲ့လက္ခဏာအားလုံးကညွှန်ပြနေတယ်၊ ​​ဆိုလိုတာကဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းမှုကိုပြိုကွဲစေပြီးသူတို့ပြန်လာပြီးဒီနေရာမှာအလျားလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုတည်ဆောက်ရမယ်။
ဒါဟာ conjunctive နှိုင်းယှဉ်တွဲဖက်ပါပဲ။ ဒီတော့ conjunctiva သည်, နှင့် disjunctive သည်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ဘူး။ ငါကြိုက်တယ် ၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကကျနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မူဝါဒရှုထောင့်မှဆန့်ကျင်လျက်ဆေးခြောက်တရားဝင်မှုကိုတရားဝင်ရှုထောင့်မှကြည့်ရှုသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီစကားဝိုင်းတွေထဲမှာပေါ်လစီတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်ဖလော်ရီဒါနဲ့အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွေလိုပဲငါတို့မှာတရားစွဲမှုတွေရှိမှာပေါ့။ မင်းတို့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဆိုလိုတာကဒါကစာသားပါ။ ပြီးတော့သူတို့က "ဒါမှမဟုတ်" လို့ပြောရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲဒီလိုခွဲထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ဒါကိုဒေါင်လိုက်ပေါင်းပြီးပြီးတော့ပြည်နယ်တစ်ခုကိုတရားစွဲဖို့အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀၊ ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ ထပ်ပြီးတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်လိုင်စင်တစ်ခုအတွက်အခြေချနိုင်ပါတယ်။ ဒါကဆေးခြောက်လိုင်စင်ကိုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာသာမကစျေးကပိုများသင့်တယ်၊
yeah yeah yeah လိုင်စင်ကအရမ်းမြင့်တယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျန်းမာရေးဌာနကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေအမြောက်အများသုံးနေတယ်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့သူတို့မှာအရင်းအမြစ်တွေမရှိဘူး။ ထို့အပြင် MMTC သည်လိုက်နာသင့်သည့်အမှန်တကယ်ပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုအမှန်တကယ်ပြenfor္ဌာန်းရန်အတွက်သူတို့၏ဘတ်ဂျက်မှလည်းဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ DOH မှာအရင်းအမြစ်တွေမရှိတာကြောင့်တကယ်တမ်းလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာသိပ်မရှိပါဘူး။
ဒီတော့မူရင်းလိုင်စင်ကသူတို့လိုကစားသမားလေးယောက်ငါးယောက်ကိုလိုင်စင်ချပေးတယ်။ ဒီတော့ဒီလူတွေကဈေးကွက်ထဲကိုအကြီးအကျယ်အစပြုခဲ့တယ်။ နောက်ပြီးနောက်မှာသူတို့လိုင်စင်ချထားလိုက်တယ်၊ အခုငါတို့ကလိုင်စင်ရ ၂၂ ခုအထိရှိတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ ၈-၉ ခုလောက်ပဲရှိတယ်။ ထိုရှစ်သို့မဟုတ်ကိုးခုအနက် ၄ ခုမှ ၅ ခုသည်ကြီးစိုးလျက်ရှိသည်၊
ဒါကြောင့် ဦး ထုပ်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ဆေးခန်းနဲ့ဆေးညွှန်းက ၂၅ ခုမှာဆေးပေးခန်း ၂ ခုရှိတယ်။ ဒီတော့သူတို့ကြီးထွားခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းသာမကအီလီနွိုက်စ်နဲ့မတူပဲသူတို့စုစုပေါင်းအရွယ်အစားစတုရန်းပေ ၅၀၀၀ ရှိမယ်။ ဖလော်ရီဒါတွင်သင်သည်သင်၏ကြီးထွားမှုကိုအကန့်အသတ်မရှိ။ မင်းရဲ့အပြောင်းအလဲကိုမင်းကန့်သတ်မထားဘူး ဖြန့်ဝေမယ်ဆိုရင်၊ နေရာ ၂၅ နေရာကန့်သတ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်တက်လာရင်…လူနာ ၁၀၀,၀၀၀ တိုင်းမှာမင်းမှာနောက်ထပ်ဆေးခန်းငါးခုကိုရရှိကြတယ်။ ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့လူနာ ၃၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိနေပြီ။ ဒီတော့ဒီဒေါင်လိုက်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ၂၅ ခု၊ အခြေခံအားဖြင့်ဆေးခန်း ၄၀ ခန့်ရှိနိုင်တယ်။
ပြီးတော့ဒီလိုင်စင်ရသူတွေကိုဆေးပေးခန်းကိုတောင်မှဖွင့်ခွင့်ပေးတဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရည်ညွှန်းတာကစူပါလိုင်စင်ဖြစ်တယ်။ ကြီးထွားလာရန်သာမကလုပ်ငန်းကြီးများသာမကဤနေရာဒေသများအားလုံးကိုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်ငွေအမြောက်အမြားကုန်ကျသည်မှာထင်ရှားသည်။
လူလေးယောက်မဟုတ်၊ ဖလော်ရီဒါအမျိုးသားလေးယောက်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့အဲဒီလူလေးယောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ လူလေးယောက်ထိုင်နေတဲ့ထိုင်ခုံမှာသန်း ၂၀ ရှိတယ်၊ သူတို့အားလုံးကဝင်ကြတာပါပဲ။ ဒါတွေဟာစုပေါင်းပြီးလမ်းပေါ်မှာအရင်းအနှီးတွေ၊ စွမ်းရည်တွေအများကြီးထည့်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ရမယ်။ ဒီလိုမြန်ဆန်စွာကြီးထွားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ကောင်းပြီ, ငါတောင်မှဆိုလိုတာကဒါကိုပြင်ဖို့ဖလိုရီယိုအမျိုးသားတွေတောင်မှမဟုတ်ဘူး။ ဖလော်ရီဒါရှိလူအများစုကအလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်မှာဖလော်ရီဒါရှိလယ်သမားများအားလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာပျိုးခင်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုလိုင်စင်ကိုရလိုက်သောအခါချက်ချင်းပင်၎င်းတို့သည်ကြီးမားသော MSO များသို့ရောင်းချခဲ့သည်။ ဒီတော့အခုဖလော်ရီဒါ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့လိုင်စင်အားလုံးနီးပါးဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ MSOs ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ဘာမှလုပ်စရာမရှိ။ သူတို့ဟာဖလော်ရီဒါအမျိုးသားမဟုတ်၊ ဖလော်ရီဒါကလူမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကဖလော်ရီဒါကုမ္ပဏီတွေတောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲ။ သို့သော်သင်သိသည်ကားလယ်သမားများ၏ကာကွယ်ရေးတွင်လူအများတို့သည်ဤလယ်သမားများအားဤလိုင်စင်များကိုရောင်းရန်အလွန်များသောအားဖြင့်ပေးကြသည်။ သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာဘဏ်လုပ်ငန်းသည်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဒေါင်လိုက်ဘက် လိုက်၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်စျေးကြီးလွန်းသည့်အတွက်ထိုလယ်သမားများသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောလယ်သမားများဖြစ်နိုင်ပြီးတစ်သန်းသို့မဟုတ်နှစ်သန်းရှိနိုင်သည်ဟုသူတို့ကဆိုကြသည်။ သန်း 30 ရှိမယ်
ဒီတော့သူတို့မှာရွေးစရာလမ်းမရှိဘူး။ သူတို့ကငွေချေးဖို့ဘဏ်ကိုသွားလို့မရဘူး သူတို့မှာတကယ့်ရှယ်ယာတစ်ခုအတွက်ရောင်းဖို့ကလွဲလို့တခြားရွေးစရာမရှိပါဘူး။ ထိုသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့တောင်သူလယ်သမားရဲ့အမှားလို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ ငါစနစ်တပြင်လုံးကိုအနည်းငယ်ချို့ယွင်းချက်ခဲ့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်သိသောနေ့၏အဆုံးမှာ၎င်းသည်စနစ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဖလော်ရီဒါသည်တော်တော်လေးကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းမှုကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စရပ်များအများကြီးနှင့်အတူကူညီခဲ့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအလျားလိုက်ပြောင်းဖို့သေချာတယ်။
ကောင်းပြီ၊ သင်ထင်ပါသလား။ ဆိုလိုတာက၊ သူတို့ကအလျားလိုက်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲမင်းကိုယောက်ျားတွေအခွင့်အရေးပိုပေးရင်သူတို့လေးယောက်ကကောင်းတဲ့စိုက်ပျိုးသူတွေကိုကြည့်ပြီးဝယ်ကြတာပေါ့။ ဆိုလိုတာကတကယ်တော့သူတို့ကမင်းမှာ cap မရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ရှိလိမ့်မယ်။
ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်သင်ပြောနေတာကတော့ Illinois နဲ့မတူဘဲကျွန်တော်တို့မှာလိုင်စင်ချထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကန့်သတ်ချက်တွေရှိတယ်၊ ဖလော်ရီဒါတွင်ကြည့်ရသည်မှာ ၀ ါရှင်တန်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအများစုပါဝင်သောကြီးမားသောကစားသမားများရှိသည့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြexactနာအတိအကျရှိသည်။ ပြီးတော့ဂိမ်းထဲမှာရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဟုတ်တယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ဖလော်ရီဒါမှာဘယ်သူမှလိုင်စင်တစ်ခုတည်းမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပြီးအကျိုးမရှိနိုင်ဘူး။ ဖလော်ရီဒါရှိအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်အခြားလိုင်စင်တစ်ခုကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်ငါဆိုလိုတာကကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး။
မဟုတ်ပါ၊ လိုင်စင်သည်သီးခြားဖြစ်ရမည်။ ဒီတော့သူတို့ကလိုင်စင်တစ်ခုတည်းအောက်မှာပေါင်းစည်းဖို့အကြောင်းမရှိဘူး။ ဆိုလိုတာကလိုင်စင်ကဒေါ်လာသန်း ၅၀ တန်တယ်။ ဒီတော့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးလာရင်ဘာကြောင့်လိုင်စင်တစ်ခုထဲကိုပေါင်းထည့်ရမလဲ။ ဒါကြောင့်ငါဆိုလိုတာကသင်ဟာ MedMen လိုမျိုးအချို့ကိုတွေ့မြင်တယ်၊ သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ဆေးခန်းတွေအတွက်အစီအစဉ်ကြီးတွေရှိတယ်၊ တကယ်တော့သူတို့ထဲကတော်တော်များများက MedMen နှင့် Surterra တို့သည်အပန်းဖြေရန်သွားရန်ဤအသနားခံစာကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေကြသည်၊ သူတို့သည်ကြီးမားသောအရင်းအနှီးကိုတင်ထားကြသည်၊
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ဖလော်ရီဒါကိုအုပ်စု ၂ စုခွဲပြီးတော့ MILF အသနားခံစာပေးတယ်။ ဒါကြောင့်ဖလော်ရီဒါကိုတကယ်ထိန်းညှိပါ။ သူတို့ရဲ့ပြproblemနာကလိုင်စင်ရ (၂၂) ခုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာလက်မှတ်တွေရဖို့ရန်ပုံငွေတကယ်မရှိဘူး။ ဖလော်ရီဒါရှိမဲများကိုရယူရန်သင်၌လက်မှတ်ပေါင်း ၇၀၀၀၀၀ ကျော်လိုအပ်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကတစ်သိန်းကျော်ကျော်တက်ပြီးတရားရုံးရဲ့ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုကိုရောက်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကသူတို့အဲဒီအချက်ကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ သို့သော် MILF ပေါ်သို့ရောက်လာပြီး MedMen နှင့် Surterra တို့၏ရန်ပုံငွေဖြင့်လူအများအပြားကထိုအသနားခံစာတွင်ဘာသာစကားအချို့ကြောင့်စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်။ လူတိုင်းကိုအတူတကွအလုပ်လုပ်စေချင်လို့စိတ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ငါတို့အားလုံးအတူတကွလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေတာကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။
ဒီတော့အခုမင်းမှာဖလော်ရီဒါကို Regulate လုပ်ထားတယ်။ လက်မှတ် ၁၀၀၀၀၀ ရပြီ။ မင်းမှာ MILFS ရှိတယ်၊ လက်မှတ်ပေါင်းတစ်သိန်းလောက်ရှိတယ်။ အချိန်ကာလသည်တိုလွန်းနေသည်၊ အခြေခံအားဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်သူတို့အနည်းဆုံးငွေပမာဏရှိရမည်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကအခြေခံအားဖြင့် ဦး ညွှတ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်ကံမကောင်းတာကသူတို့မှာအတူတကွစုရုံးဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့တယ်။ သူတို့အတူတကွလာရင်တရားဝင်ဖြစ်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ အကြီးမားဆုံးပြissueနာအိမ်မှာကြီးထွားဖြစ်ပါတယ်။ ပြပွဲအစမှာမင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအိမ်တွင်းကြီးရင့်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာငါသိတယ်။ MILF ၏အသနားခံလွှာတွင်ဖလော်ရီဒါအားထိန်းညှိရန်အိမ်ကြီးထွားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာမရှိပါ။
ယခုသင်ဤ MILF အသနားခံစာကိုပြောပြီးပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါက MILF ကိုကြားတာနဲ့တူတယ်၊ “ ဒါကအထူးသဖြင့်ဖလော်ရီဒါမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့လိုတယ်ထင်တယ်။ ” အဲဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါ MILF အသနားခံစာလို့ခေါ်တယ်။ မေးခွန်းကောင်းတစ်ခု။
၎င်းသည်ဖလော်ရီဒါ၌ဆေးခြောက်တရားဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ [crosstalk 00:15:50] ဒါပေမယ့် MILF ကိုခင်ဗျားပြောတာကသူတို့ freaking ဖြစ်သင့်တာပေါ့၊ သူတို့ကအဲ့ဒီနောက်မှစျေးကွက်တင်သင့်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ [crosstalk 00:15:59]
တဖန်သင်တို့ရရှိပါသည်, သင်ကရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကသင်နဲ့တူတဲ့ပြkindနာတစ်ခုပါ၊ “ အိုကေ၊ မင်းမှာဒီယှဉ်ပြိုင်မှုနှစ်ခု [[inaudible 00:16:08]] အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ မင်းပြီးရင်မင်းရဲ့အလုပ်ကိုနှစ်ဆပိုခက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့နောက်တဖန်, အိမ်မှာကြီးထွားဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူနာနှင့်သူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမလား? ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုကအခြားတစ်ခုကနေခွဲထွက်သွားတဲ့အိမ်ကြီးပွားမှုကဘာလဲ။
ဒါကြောင့်တကယ် Regulate ဖလော်ရီဒါဟာအမှန်တကယ်ပဲဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်လိုချင်တဲ့လူတစ် ဦး ရဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်။ MILF လှုပ်ရှားမှုကိုအမှန်တကယ် MedMen နှင့် Surterra တို့ကကျောထောက်နောက်ခံပြုခဲ့ပြီးအိမ်ကြီးထွားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်အရာမျှမပါ ၀ င်ခြင်းမှာသူတို့၏အကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကသူတို့ကြီးထွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဥပဒေပြုအမတ်ကိုချန်ထားမှာဖြစ်ပြီးအိမ်ကနေထွက်ခွာရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကထွက်လာတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကိုရှုပ်ထွေးစေမည်ဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုသင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားရန်လိုအပ်သည်ဟု MILF ၏အသနားခံစာသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလွန်တိုတောင်းသောကြောင့်သူတို့ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဖလော်ရီဒါ၏အသနားခံစာမှာအလွန်များပြားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်၌ဖလော်ရီဒါနှင့် ၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းနှင့်၎င်းသည် [inaudible 00:17:11] မေးခွန်းမဟုတ်ပါ။ မေးခွန်း ၂- ပိုင်းပါမယ်။ ပထမ ဦး စွာဖလော်ရီဒါရှိဥပဒေပြုလွှတ်တော်သည်၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်ကိုအတူတကွ စုစည်း၍ ပြဌာန်းချက်တစ်ခုအဖြစ်စုစည်းနိုင်မည်လား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကမဲပေးမှုအကြောင်းပြောနေတာဆိုရင်အဲဒါကဒုတိယအပိုင်းပဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတာကိုသင်ထည့်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူကအဲဒါကိုအနက်ဖွင့်ပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်တယ်၊ ဒါကငါတို့လိုဥပဒေကြမ်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုဖြစ်နိုင်တယ်။
ဟုတ်တယ် ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဆီနိတ်တာက Jeff Brandes ကအထက်လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကို ၁၈၆၀ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်၊ နောက်ဆုံးဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Michael Michael Grieco မှာသူကအပန်းဖြေမူကြမ်းကိုလည်းတကယ်ထုတ်ထားတယ်။ သူကအဲဒါကိုမသိဘူး၊ ငါကမိုက်ကယ်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တယ်၊ သူကတကယ်ကိုရိုက်ချက်မရှိဘူးလို့ပြောတယ် ဒါပေမယ့်သူကမက်ဆေ့ခ်ျပို့ချင်တယ်၊ “ ဟေး၊ ဒီဟာငါတို့မနှစ်ကဆွေးနွေးမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ငါတို့လိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်” ဒါကြောင့်ဒီနှစ်မှာတော့ Jeff Brandes ကဒီဥပဒေကြမ်းကို ၁၈၆၀ တွင်တင်သွင်းခဲ့သည်။ ငါအဲဒါကိုထောက်ခံတယ် ဒါဟာတကယ်တော့အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာရှယ်ယာအစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့တာကိုငါသိတယ်။ ၎င်းတွင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါကြောင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိလူမှုရေးဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုအစိတ်အပိုင်းအချို့ရှိသည်။
အတိအကျဟုတ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းအီလီနွိုက်စ်မှာမင်းဆိုလိုတာက ၂၀% ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒီတော့ဒါကအချက်တွေအများကြီးပါ။ ဒါကြောင့်လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုနဲ့လျှောက်ထားသူမည်သူမဆိုတော်တော်များများကသူတို့မှာအခွင့်အရေးမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကဘာအချက်မှမချပေးဘူး။ ဒါပေါ့-
ဟုတ်တယ်၊ အမှန်တရားကတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးရိုးစွဲဥပဒေပြုအမတ်ကဒီဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ခြေနည်းနည်းလေးရှိတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တို့မူကား, ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်, သင်ဘယ်တော့မှမသိသောအရာကိုငါသိ၏။ ဒါကြောင့်သင်သိငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီဥပဒေကြမ်းအပေါ်လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံစောင့်ရှောက်တာပါ။ သူတို့ဟာအခုတက်နေပြီ၊ ဒါကြောင့်သူတို့အစည်းအဝေးလုပ်နေကြတာ။
၎င်းသည်လက်ရှိတွင်ရှိသောပုံစံဖြင့်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ၄ င်းသည်မတူညီသောပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုအတည်ပြုပြီးခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းပါပဲ။ ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဖလော်ရီဒါမှာကြီးမားတဲ့အချက်ကဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းမှုပဲ။ သူတို့ကဘာမှစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ခွင့်မပြုပါ။ ဒီတော့ကြီးထွားလာတာကနေအပြောင်းအလဲလုပ်တာအထိထုတ်ပေးတာအထိသူတို့ဟာအဲဒီ ၀ န်ဆောင်မှုတွေထဲကဘယ်ဟာမှစာချုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။
အထက်လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ၁၈၆၀ သည်၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကိုချုပ်ဆိုရန်အတိအလင်းခွင့်ပြုထားသည်။ ဆိုလိုတာက ၀ န်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူတွေရှိလာမယ်၊ ဒီလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီတွေနဲ့အခုလာပြီးစာချုပ်ချုပ်နိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်လူအများအပြားကသူတို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်လိုသည့်အတိုင်းအတာအထိ၊ ဆေးခြောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအထူးပြုနေသောကုမ္ပဏီများနှင့်လက်ရှိဖလော်ရီဒါတွင်လက်ရှိတွင်မရရှိနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများပေါ်ပေါက်လာရန်အခွင့်အလမ်းများရှိကြောင်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
ခင်ဗျားဟာရှေးရိုးစွဲနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်လို့ခင်ဗျားပြောခဲ့တာကို၊ ဖလော်ရီဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါလူအိုတွေ၊ ရှေးရိုးစွဲဝါဒနဲ့အဲဒီငွေတွေအားလုံးကိုငါထင်တယ်။ ငါကဂျာစီမှာနေခဲ့ဖူးတယ်။ မင်းရဲ့နိုင်ငံရေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့နေထိုင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းထင်သလား Big Pharma ရဲ့တွန်းပို့မှုကများလား။ ဆိုလိုတာကလူကြီးတွေဟာမင်းရဲ့ဆန္ဒမဲပေးသူ ဦး ရေကိုဘယ်တော့မှမချဉ်းကပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှေးရိုးစွဲပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ဟာဆေးခြောက်ကိုမညီမညာဖြစ်စေတဲ့လုပ်ရပ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဒါဟာမဟုတ်ဘူး၊ ဆီမွှေးနဲ့တူတယ် ဒါဟာအရက်ထက်ပိုကောင်းတယ် နောက်ဆုံးမှာငါတို့အားလုံးလိုချင်တဲ့တရား ၀ င်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်မှာပါ၊ သင်ကပန်းဂေါ်ဖီလိုမျိုး ၀ ယ်လို့ရပါတယ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူတွေကြီးထွားလာနေသောကြောင့်, 50 ဆင့်တစ်ပေါင်လိုပဲ။
ကြည့်စမ်း။ ဖက်ဒရယ်အဆင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာပါတီနှစ်ခုစလုံးအတူတကွပူးပေါင်းလာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါသင်ကဖလော်ရီဒါမှာစတင်မြင်စတင်ထင်နှင့်သင်ကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များတစ်လျှောက်လုံးမြင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါသမိုင်းကြောင်းအထင်, သိသာရဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်ရပြီ ... ထိုအခါကြည့်ရှု, ငါကွန်ဆာဗေးတစ်ဆန့်ကျင်ဘာမှမရှိဘူး။ တကယ်တော့ငါကိုယ်တိုင်ကွန်ဆာဗေးတစ်တစ်ယောက်ပါ၊ ကိစ္စရပ်တွေအပေါ်မဲပေးတယ်။ သို့သော်ဤပြparticularနာနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့သည်အလွန်ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်ပြောင်းလဲသွားကြသည်။ ငါပြောင်းလဲပြီရှေးရိုးစွဲဥပဒေပြုအများကြီးနှင့်စကားပြော, သူတို့ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကငါတို့ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့လူ ဦး ရေပိုများတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ သူတို့ကဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုနားလည်တယ်။ ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောဆရာဝန်အချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်နယ်ပါလီမန်အဆောက်အအုံရှိတာလлахစီစီတွင်သူတို့၏အသံများကိုအမှန်တကယ်ကြားသိခဲ့ရသည်၊
သငျသညျ၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုထင်ပါသလား ... စိတ်မကောင်းပါဘူး, သင်တ ဦး တည်းဆေးခြောက်ဥပဒေများနှင့်ပတ်သက်။ ဖလော်ရီဒါ၏လူတို့နှင့်အတူပိုပြီးပဲ့တင်ထပ်နေထင်ပါသလဲ ၎င်းသည်မည်မျှကောင်းသည်၊ ထိရောက်သောဆေးဝါးသို့မဟုတ်၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်းကြောင်းသတင်းစကားပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဖလော်ရီဒါကိုစဉ်းစားတဲ့အခါရှေးရိုးစွဲလို့ငါထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထင်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှေးရိုးစွဲပဲ။ သူတို့လုပ်နေတာတွေကိုဂရုစိုက်ကြတယ်။ သူတို့နံပါတ်တွေကိုဂရုစိုက်တယ်။
ကောင်းပြီဒါကြောင့်သင်ပြောပြဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စာတွေ၊ ဥပဒေကျောင်းမှာအမြဲတမ်းသင်ကြားပေးနေတာကမင်းရဲ့ပရိသတ်ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာသိဖို့ပါပဲ။ ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်အလွန်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအမြဲသိသည်။ သင်ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ပညာတတ်လူတစ်ယောက်၊ ငွေကြေးကိုနားလည်တဲ့သူ၊ ဘဏ္financeာရေးကိုနားမလည်တဲ့သူနဲ့စကားပြောနေလားဆိုတာသိရတော့မယ်။ မင်းဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုတာမင်းနားလည်ရမယ်။ ထိုအဟုတ်, ရှေးရိုးစွဲလူတို့နှင့်အတူပတျသကျသောအရာတို့ကိုဤငွေရှာသောအရာဖြစ်ကြ၏။ ဒီမှာအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါတို့ရရှိနိုင်သောအခွန်ဒေါ်လာအမြောက်အများ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်အခြားပြည်နယ်အချို့တို့၏အမှားများကိုအခက်အခဲဖြင့်အခွန်ကောက်ခြင်းဖြင့်မလုပ်လိုပါ။
ဒါပေမယ့်ကွန်ဆာဗေးတစ်အုပ်စုတွေနဲ့တော်တော်လေးဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ငါထင်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ သို့သော်မသန်စွမ်းအချို့အကြောင်းပြောဆိုရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာဆေးရုံဆေးခန်းများကိုအမှန်တကယ်တားမြစ်သောမြှို့နယ်အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်နယ်ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည်။ ဒါ့ကြောင့်ဒေသန္တရအဆင့်မှာလည်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရပြီးတချို့အရာရှိတွေကိုသူတို့ဘာကြောင့်ပိတ်ပင်သင့်တာလဲဆိုတာကိုပညာပေးခဲ့တယ်။ နှင့်သိသာသောအကြောင်းအများကြီးအမည်းစက်အပေါ်အခြေခံသည်။ လူထုကိုပညာပေးဖို့နဲ့ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်
ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာအများပြည်သူကိုပညာပေးကြပါစို့၊ ကျွန်ုပ်သည်အများပြည်သူဖြစ်လို့ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ကပါ။ ငါတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့မဲပေးခွင့်ကိုခွင့်မပြုဘူး။ သင်သူတို့ဆေးထည့်သောသေးငယ်သောပြင်ဆင်မှုကိုသင်မည်သို့ပြုလုပ်ပြီးသင်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကိုလိုင်စင် ချ၍ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်နိုင်ရန်အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းများအပါအ ၀ င်ဥပဒေပြုမီးရထားပုံစံတစ်ခုလုံးကိုမည်သို့ဖန်တီးသနည်း။ ဒါမှမဟုတ်ဖလော်ရီဒါရှိဆေးခြောက်လုပ်ငန်း?
ကောင်းပြီ၊ အားလုံးကအသနားခံစာကစတယ်။ ဒါကြောင့်သင်အသနားခံစာကိုရေးဆွဲရမယ်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ တကယ်လို့သင်ဒါကိုလေ့လာကြည့်တော့မင်းမှာလက်မှတ် ၉၀၀၀၀ ကျော်လိုတယ်ထင်တယ်။ ထို့နောက်တရားရုံးချုပ်သည်ဘဏ္reviewာရေးဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးသူတို့သည်ဘာသာစကားကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်၏ဘာသာစကားသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိုအပ်ရန်လိုအပ်ပြီးခေါင်းစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်အကြောင်းအရာများစွာကိုဖုံးကွယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီတော့မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်း၊ တရားရုံးချုပ်ကပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတာနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာလက်မှတ်ပေါင်း ၇၆၆၀၀၀ လောက်လိုချင်တယ်။
ထို့နောက်၎င်းသည်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းအပေါ်သို့ရောက်သွားသည်၊ ၎င်းကိုသင်မဲပေးရသည်။ ထို့နောက်ဥပဒေပြုသူများသည် ၀ င်ရောက်လာပြီးထိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီသောပြဌာန်းချက်ကို [inaudible 00:24:45] ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်မှာထိုဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လာရာဖလော်ရီဒါတရားရုံးချုပ်အမှုကိစ္စဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဖလော်ရီဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်ဖလော်ရီဒါဥပဒေအပေါ်တရားရုံးချုပ်ဖြစ်သည်။ ဖလော်ရီဒါဥပဒေနှင့်ဖလော်ရီဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြားပaိပက္ခဖြစ်ပွားပါကပြanနာတစ်ခုရှိပြီးထိုပြဌာန်းချက်သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်သည်။
အဲ့တာက၊ ငါအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကတည်းကပါ။ နွေ ဦး ရာသီနားမှာလူတစ်ယောက်ရှိနေသေးလား။ Daytona နှင့်ထိုအရာအားလုံးသည်အရာရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်အရာရာသည်လိုပဲလား။
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ Fort Lauderdale ကမ်းခြေမှာနေတယ်။ ဒါဆိုဟုတ်ပြီ၊ မတ်လရောက်ရင်ဒီမှာရူးနေပြီ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကမ်းခြေနဲ့ဝေးနေဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။
ရိုင်းသော shit ။ Jimmy Buffett ရဲ့ Sunterra (သို့) Surterra ပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဘတ်ဖတ်သည်ဖလော်ရီဒါဆေးခြောက်ဈေးကွက်တွင်အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ Surterra ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ မင်းကိုငါပြောမယ်။ Deerfield ထဲကကမ်းခြေတစ်ခုနဲ့ငါသူတို့ဆေးခြောက်ဆေးခန်းတွေကိုတားမြစ်ဖို့ရှာနေတဲ့အချိန်မှာ Deerfield ကြားနာမှုမှာငါပြောခဲ့တယ်။ MedMen ကမ်းခြေပေါ်ကနေရာကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အာရုံစိုက်မိတာကဘာလဲ။ ။ MedMen ဟာအပန်းဖြေမှု၊ သူတို့အာရုံစိုက်တာကိုစျေးကွက်ကနေကြည့်တဲ့အခါသူတို့ဟာ
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ဟာအပန်းဖြေအိမ်ခြံမြေဆေးခြောက်ကစားနည်း၊ ဒါကြောင့်သူတို့က 'အိုး၊ အခုငါးနှစ်ရှိပြီ၊ ငါတို့တွေအားလုံး spliffs တွေရတော့မယ်၊ reggae တွေကိုနားထောင်နေမယ်၊
ကမ်းခြေတွင် Deerfield သဲသောင်ပြင်၌အေး။ ထို Deerfield ကလူထဲကကင်လုပ်ခိုင်းကြောက်တယ်။ ထိုသူတို့ကတကယ်တော့ပြီးနောက်တကယ်တော့ပြီးနောက်ပိတ်ပင်မှုလုပ်နေတာအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ MedMen ကသူတို့တည်နေရာကိုရခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်။ ထိုအခါငါတကယ်တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကသူတို့ဖလော်ရီဒါပြဌာန်းချက်အောက်မှာလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သောအရာကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ ဖလော်ရီဒါဥပဒေအရ၎င်းတို့အားထားရန်ခွင့်မပြုပါ။ သူတို့သည်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းများကိုခွင့်ပြုပါက၎င်းတို့သည် ဦး ထုပ်မထည့်နိုင်ပါ။ သငျသညျ Deerfield session တစ်ခုမှာကြားနာ၏မိနစ်ကိုဖတ်လျှင်ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောမြူနီစီပယ်တစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ပျက်လျှင်, ငါယုံကြည်တယ်အဘယျသို့ငါအမှန်တကယ်ဆေးခန်းပိတ်ပင်ရန်လိုသောသူတို့၏အခြေခံမှာသူတို့ကသူတို့ကိုလုံလောက်သောရှိခဲ့ထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဆေးညွှန်းကန့်သတ်ချက်ပမာဏကိုရှေ့ဆုံးကန့်သတ်ချက်မထားပါက၊ အချို့ဆေးရုံများကိုအဘယ်ကြောင့်ခွင့်ပြုပြီး“ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့မှာလုံလောက်ပြီ။ ။ " အခြေခံအားဖြင့်အဲဒါဟာရုပ် ၀ တ္ထုပါ။ သိသိသာသာသူတို့အတူတူပါပဲလုပ်နေတာ။ MMTC ကဒီတားမြစ်ချက်ကိုတိုက်ချင်ရင်သူတို့မှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ကိစ္စရှိမယ်ထင်တယ်။
ဖလော်ရီဒါတွင်နေရာအနှံ့တွင်ဤ asinine နိုင်ငံရေးသမားများသည်ဆေးခြောက်ကိုတားဆီးနေသောအရူးဖြစ်သည်။ ဖလော်ရီဒါ၊ အတ္တလန်တာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကြီးထွားလာတာကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တိုင်းနဲ့နွေရာသီနားချိန်တွေမှာအနည်းဆုံးပွဲတော်များကိုအရက်သောက်စေတယ်။ မင်းက“ အိုကေ၊ ဒီ fuck ဆိုတဲ့ပေါင်းပင်လေးကိုအခွင့်အလမ်းပေးကြပါစို့” လို့မပြောခင်မင်းဟာမင်းရဲ့ fucking မြို့မှာအရက်နဲ့မကောင်းတဲ့ shit တွေပိုဖြစ်ဖို့လိုသလား။
နှစ်သစ်ကူးကာလ၌ Phish က Big Cypress ကိုခေါ်ယူသောအခါသူက“ အိုဘုရားသခင်၊ ဖလော်ရီဒါမှာခုနစ်နာရီကြာဖီဆန်ဖျော်ဖြေပွဲရှိတယ်၊ ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ potheads သွားဖို့လမ်းရှိတယ်” ဟုငါမဆိုလို။ မဟုတ်ဘူး။ ငါဆိုလိုတာကဒီလူဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့လူပဲ။ ထိုအမည်းစက်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ပြီးတော့ဒါကလူတွေအငြိမ်းစားယူသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်၊ ဒါကအသက်အရွယ်နဲ့လည်းဆက်စပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဆိုလိုနိုင်
ထိုအပင်အမည်းစက်ကိုကျော်သယ်ဆောင်။ ငါခေါင်းစဉ်သိပ်မယူရန်စတင်သည်, ဒါပေမယ့်ငါ psilocybin မှိုလှုပ်ရှားမှု၌အလွန်ပါဝင်ပတ်သက်ရတော့မည်နှင့်ငါတကယ်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရုံငါ့အဘို့အမြတ်အစွန်းစတင်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှာငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလာတော့မယ်။ ဒါပေမယ့်အမြတ်အစွန်းမယူတာဟာဖလော်ရီဒါရှိ psilocybin မှိုများတာ ၀ န်ယူမှုရှိတဲ့ဥပဒေရေးရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာသုတေသနပြုခြင်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်ပြီးသားမှာသိသာအခန်းထဲမှာလုပ်ပြီးပြီ။ သို့သော်တစ်ဖန်စိန်ခေါ်မှုမှာအမည်းစက်ဖြစ်သည်။
ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှမည်သူမျှသေဆုံးခြင်းမရှိပါ။ psilocybin မှိုများမှမည်သူမျှမသေပါ။ အခုသူတို့ကမကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တော့မယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုရှိသောဥပဒေရေးရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ငါထင်တယ်။ လူအများအပြားက၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေအောက်တွင်ယူနေကြသည်။ ဒါကြောင့်လူတွေဟာကားတွေရှေ့မှာလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကဂလူးကို့စ်ဂျင်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိပုံရတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမထုတ်ယူနိုင်ပါ။ ဖလော်ရီဒါဆေးခြောက်ဥပဒေများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုမပြုမီ၊ ခေတ္တမျှ၊ ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများအက်ဥပဒေအောက်တွင်စီစဉ်ထားသော psilocybin ကဘာလဲ။
Psilocybin သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကပြန်လှည့်တာ၊ လူမျိုးစုတွေကိုကြည့်ခြင်း၊ သူတို့လုပ်နေကြတဲ့ကြီးမားတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးကိုဝိညာဉ်ရေးရာအကြောင်းတွေကြောင့် Ayahuasca Burner လိုပစ္စည်းမျိုးယူဖို့အမှန်တကယ်ခွင့်ပြုထားတာပဲ။ သို့သော်သုတေသနပြုပြီးပါပြီ။ ငါတကယ်ဝင်လာတယ်ဆိုတာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ အဲဒါကငါ့ရဲ့ဖောက်သည်အားလုံးနီးပါးပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါဆေးခြောက်ဖောက်သည်တော်တော်များများက psilocybin ရဖို့စိတ် ၀ င်စားကြပြီးအရင်းအနှီးတွေမြှင့်တင်ဖို့၊ အရင်းအနှီးတွေစုဆောင်းဖို့နဲ့စတင်ဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့်ဂျမေကာရှိမရှိအချို့သောပစ္စည်းပစ္စယလုပ်နေတာ။ ဒင်းဗားသည်၎င်းကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်သည်။ Oakland သည်အမှန်တကယ်တွင်လည်းချီကာဂိုကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသည်။ ဗားမောင့်မှာငွေတောင်းခံလွှာရှိတယ် အော်ရီဂွန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသနားခံစာတယ်။
ဒါနဲ့ဒီမေးမြန်းစုံစမ်းမှုတွေကိုငါရခဲ့တယ်။ ပြီးတော့တော်တော်လေးရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာအဲ့တာကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင် psychedelics မယူဘူး ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်စားပြုတဲ့ကျွန်တော့်ဆရာဝန်တချို့နဲ့တကယ်စကားပြောခဲ့ပြီးဆရာဝန် ၇ ယောက်ကနေ ၁၀ ယောက်လောက်ကိုစကားပြောခဲ့ပြီးလက်တွေချလိုက်တယ်။ သူတို့တစ်ခုချင်းစီဟာဆေးဖက်ဝင်တန်ဖိုးကိုအကြီးအကျယ်ယုံကြည်သူတွေပါ။ ဒါနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စလေ့လာပြီးဂျမေကာမှာရှိတဲ့အချို့သောစိုက်ပျိုးသူများနှင့်ကုထုံးပညာရှင်နှင့်စကားစပြောခဲ့သည်။ ketamine ကိုသုံးနေတဲ့ငါ့စိတ်နာရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုဆရာဝန်အချို့ကဒီမှာစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များနဲ့စကားပြောနေတာ။ ထိုအခါငါဆေးခြောက်တန်ဖိုးကိုငါဆေးခြောက်ထက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးပိုမိုယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့ရှိသည်သောအထောက်အထားကြီးမားသည်။ ထိုအခါ FDA ကပင်နောက်ကွယ်မှရစတင်နေသည်။ တကယ်တော့ဒါကဆေးခြောက်ထက်လက်ခံတဲ့ FDA ရှုထောင့်ကနေကြည့်တာပါ။
ဒါပေမယ့်မင်းက shosing တွေလိုတောင်မိုက်ခရိုထိုးဆေးလိုမျိုးပြောနေတယ်။ ငါဒီမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသိတယ်၊ သူကသူတို့ကိုဆေးတောင့်တွေထည့်မယ်၊ ငါဆိုလိုတာကကလေးဘဝတုန်းကကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်၊ မင်းစုံတွဲတစ်တွဲယူနိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါပျော်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါအများကြီးယူသောကြောင့်, ဒီလိုပဲကောင်းသောညဖြစ်သွားသည်။ ၎င်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရအကျိုးရှိသည်။ ဆိုလိုတာကမင်းကသဘာဝအရအရာတွေပြောနေတာပဲ။ အရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်သလဲ tumeric နှင့်ဤအပေါငျးတို့သညျအခွား shit တောင်မှ, က All-
ကောင်းပြီ၊ ငါထင်တာတစ်ခုကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်။ psilocybin မှိုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သူမဆို၏ခရီးစဉ်အကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးသည့်အခါတိုင်းသင်သိသည့်အတိုင်းသူတို့အားလုံးနီးပါးသည်ကဗျာဆန်ဆန်ပြောကြသည်၊ သူတို့အသားအရေကိုမျှဝေကြသည် (သို့) သူတို့အားလုံးသည် [unaudible 00:31:49] နှင့်အတူတူ။ psilocybin မှိုများနှင့်ပျောက်ကင်းစေရန်သူတို့ရှာဖွေနေသည့်အဓိကအချက်သုံးချက်ကိုသင်စဉ်းစားပါကစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ PTSD နှင့်စွဲခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်အဲဒီအရာတွေထဲက ၃ ခုလုံးကဘာလဲဆိုတာကိုတကယ်တမ်းစဉ်းစားမိရင်၊ စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေတယ်၊ တစ်ခုခုအဲဒီမှာမပါ။ psilocybin မှိုများကဘာကိုလုပ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်ကိုဖွင့်ဟ။ သင်၏စိတ်ကိုဖွင့ ်၍ ကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်ကိုရရှိရန်နှင့်သင်၏စိတ်ကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထိုသူတို့ကဂျမေကာမှာသူတို့လုပ်နေကြတာပါ။ သင်သွားတဲ့ကုထုံးဌာနတွေအများကြီးရှိတယ်၊ မင်းသွားပြီး ၇ ရက်ဆုတ်ခွာတယ်၊ စသည်ဖြင့်စသည်ဖြင့်ဖြစ်တယ် [crosstalk 00:32:23]
ဒါမှမဟုတ် SSRI လို့ခေါ်တဲ့သူကဒါကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Florida, Illinois, Seattle မှာဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်လုပ်တာလို့ထင်တယ်။ ပြီးတော့ဒီထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ် psilocybin ၏စည်းမျဉ်းပြောင်းလဲမှုသည်ဤဆေးဝါးများကိုထိန်းညှိရန် ၂၀ ရာစုအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်းများသည်မိုက်မဲပြီးမှားယွင်းခြင်းနှင့်အတော်လေးဆက်စပ်နေပုံရသည်။ ပြီးတော့အဲဒါကငါတို့ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့နာကျင်စေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကပိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်ကျစေတဲ့၊ ပိုပြီးစွဲလမ်းစေတဲ့ဘဝတွေကိုဖန်တီးပေးလို့ပဲ။ ထိုသူတို့ကတကယ်တော့မြှင့်တင်ရန်လိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ဟာ Flintstones တီဗီမှာစီးကရက်တွေသောက်ပြီးသူတို့ကိုစာသားကလေးတွေကိုရောင်းခိုင်းတာ ၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကလိုမှတ်မိသေးတယ်။ ယခုတွင်သင်သည်ထိုရာစုနှစ်ကပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့်အတိတ်ကိုတိုက်လှန်ရန်လိုအပ်သည်။ “ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီဆေးသုတေသနကိုကြည့်ပါ။ ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုသနည်း။
တကယ်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကဒီလှုပ်ရှားမှုကို ဦး ဆောင်နေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းရှိရှေ့နေများနှင့်စကားပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ Noah Potter လိုလူငယ်တွေဟာသူဟာ Psychedelic Law Blog မှာ ၉၀ ကျော်ကတည်းကပါဝင်ခဲ့တယ်၊ ငါဟာဒီလူဟာ psychedelics၊ တရား ၀ င်မူဘောင်များ၊ ဒါပေမယ့်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကဘာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ ငါတကယ်တာဝန်ရှိသူဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုသုံးတယ်။ ၎င်းသည်ဆေးခြောက်နှင့်မတူပါ။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများစွာနှင့်အတူ၎င်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူဘောင်ဖြစ်သင့်သည်ဟုမယုံကြည်သည့်အတွေးကျောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူဘောင်ကိုကိုင်တွယ်တဲ့အခါ၊ ငါနော Pot Potter နဲ့အတူဒီကိစ္စကိုကြာမြင့်စွာစကားပြောခဲ့ပြီးသူမှာဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကျယ်တဲ့ဘလော့ဂ်ရှိနေလို့ပါ။
ဒါပေမယ့်သင်ဆေးကုသမှုအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသင့်မှာအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့အခြေအနေရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင့်မှာအရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုရင်၊ သင်ဟာရာဇ ၀ တ်သားတစ်ယောက်ပါ၊ နော feels ၏ခံစားချက်နှင့်ငါနှင့်စကားပြောခဲ့သောအခြားရှေ့နေများသည် psilocybin မှိုများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရအလွန်တန်ဖိုးရှိသည်၊ ဥပမာဝိညာဉ်ရေးရာ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အမြတ်အစွန်းမရတဲ့တာ ၀ န်ယူမှုရှိတဲ့ဥပဒေရေးရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရော၊
ဆေးခြောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က“ မဟုတ်ဘူး၊ ငါဝိညာဉ်ရေးရာအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ဆေးခြောက်ကိုယုံတယ်။ ငါကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုကျင့်သုံးခွင့်ကငါ့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲ” ဟုပြောလျှင် သူတို့က“ နah” လို့ပြောနေတုန်းပဲ
ဆေးခြောက်နှင့်မှိုနှစ်မျိုးလုံးတွင်ကျန်းမာရေးပြissueနာဖြစ်သည်။ ငါဆိုလိုတာကလူတွေကဒါကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာ၊ ဒါပေမဲ့တူညီတဲ့လက္ခဏာတွေကလူတွေကအများကြီးယူနိုင်တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ဘ ၀ ကအဲဒါအတွက်ပိုကောင်းတယ်။ ငါတို့ပြစ်မှုထင်ရှားပြီးပြီ။ အမေရိကကငါဟောတဲ့တရားကတရားဟောဆရာရဲ့သမီးနဲ့တူတယ်၊ ဟုတ်လား? မင်းကသူ့ကိုအားလုံးဖိနှိပ်ထားတယ်၊ မင်းကသူ့ကိုမင်းရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဗီရိုထဲမှာထားခဲ့ပြီးပြီ၊ “ အိုး၊ ငါတို့အားလုံးနင့်ကိုမုန်းတီးတာကြောင့်ငါဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးဖို့မေ့နေခဲ့တာ” ကော်ဖီသည်မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များတွင်ကဖိန်းဖြစ်သည်။
ငါမှိုထဲကိုဘယ်တော့မှမ ၀ င်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကဒါကိုများသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတစ်ချိန်ကလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာငါ့ကို shits နဲ့ pukes တွေပေးခဲ့လို့ပဲ။ စတင်ရန်ကြောက်မက်ဘွယ်သောနည်းလမ်း။ ဒါပေမယ့်သင်သိ ... ဖြစ်ပျက်။ ဒီတော့ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော့်ကိုဘောလုံးတွေအမြောက်အမြားဆွဲဆောင်နေတုန်းပဲ၊ ဒီအဆင့်အထိမရောက်သေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအချိန်ပိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါ။ ငါကြည့်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့မှာအထူးသဖြင့်လမ်းညွှန်ပေးမယ့် shaman လိုမျိုးမရှိကြပါဘူး…
မင်းကိုငါပြောမယ်ငါဒီမှာ Miami မှာယောက်ျားတွေရှိတယ်။ သူတို့ကိုဝိညာဉ်ရေးရာခရီးများမှတဆင့် ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးသောသူတို့ကဒီမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရှမ်းလူမျိုးများကိုသူတို့ကိုငါပြောခဲ့တယ် ဒီနေရာမှာဂျမေကာမှာတရားဝင်ဆန့်ကျင်တဲ့နေရာတွေဆုတ်ခွာဖို့စီစဉ်တဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့တွေတော်တော်များများပြောနေတာကတော့သင့်ရဲ့ set နဲ့ setting ပါ။ သူတို့သတ်မှတ်ထားသည့်အခါသင်၌မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပြီးသင့်တော်သောချိန်ညှိမှုလိုအပ်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို ဦး တည်ရာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လို့ပဲ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာသင်မယုံကြည်သောသူများနှင့်ပတ်သတ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေလျှင်သင်ဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခရီးကိုသွားလိမ့်မယ်။ အပြန်အလှန်။ သင်လှပသောဝန်းကျင်၌သင်ဂရုစိုက်သူနှင့်သင့်ကိုဂရုစိုက်သူနှင့်သင့်ကိုရှာနေသောသူများထဲတွင်ရှိနေသည်ဆိုပါက ဒါက shaman ရဲ့အလုပ်ပဲ၊ မင်းကိုခရီးတစ်လျှောက်ပို့ဆောင်ပေးဖို့ပါ။
ထိုအခါငါကဒီကိုမုန်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကဤကဲ့သို့သောစကားမျိုးတစ်ခါမျှမဖြစ်ခဲ့ဖူးဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်မှာရယ်စရာဖြစ်သည်။ ငါကcertainlyကန်မုချ hippie မဟုတ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းသိတယ်
ဒါပေမယ့်ဒါကမမှန်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာမင်းတို့ကငါတို့ကိုအချိန်မှန်တိုက်ခိုက်နေတာကိုခံနေရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်မစဉ်းစားခဲ့မိလို့ပါ။ လူတွေကဒီလိုပြောနေကြတယ် -“ ကြည့်စမ်း၊ ငါ့ရဲ့အမည်းစက်ကိုငါချမှတ်လိုက်ပြီ။ ပြီးတော့ငါကဒါဟာ bullshit ပဲဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ သို့သော် [ပုံရိပ် 00:37:05] လက်တံသည်လူကိုအလုပ်ဖြစ်စေသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ၊ ဆေးခြောက်နှင့်မှိုတို့နှင့်အတူဖြစ်စေ၊ စိတ်ပညာလည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဝိညာဏ, စိတ်ပညာ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပါပဲ။ ကျနော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြောင်းပြောတယ်၊ ဒါကလည်းဝိညာဉ်ရေးရာပဲ။ သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးသင်နှင့်တူသောရှုထောင့်တစ်ခုရှိသည်နှင့်တူသည်။ “ အဲဒါကိုသင်က PTSD အတွက်ရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမှန်တကယ်နာကျင်မှုအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ လူသားတစ် ဦး အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်းဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ပြီးတော့လူတွေဟာသတိမရှိဘဲနေကြတယ်။ သူတို့၌ကောင်းမြတ်ခြင်းခံစားမှုမရှိဘဲသူတို့နေထိုင်ကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတရားမဝင်ဘူး၊
ထိုကြောင့်ငါထင်ဒါကြောင့်အားလုံးတာဝန်ရှိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေများနှင့်အညီတာ ၀ န်ယူရမည့်အပြင်မိမိကိုယ်ကိုလည်းတာ ၀ န်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သိသည်မှာသင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတာဝန်မဲ့စွာသို့မဟုတ်သင်၌တာဝန်မဲ့သောစည်းမျဉ်းများရှိပါကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သာအရေးမယူဘဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရလျှင်ကျွန်ုပ်လည်းထိုအရာအတွက်မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီစကားပြောဆိုမှုတွေအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နေသည့်သုတေသနကိုလုပ်သည်။ လုပ်နိုင်သောအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆွေးနွေးမှုများရှိသည်။ ရိုးသားမည်၊ ဥပဒေမူဘောင်မည်သို့ဖြစ်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မသိပါ။ ထို့ကြောင့်အမြတ်အစွန်းမဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုချက်ချင်းအရေးယူခြင်းမပြုတော့ပါ။ ငါလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်သာမကကိုယ့်အတွက်ပါအသိပညာကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါမှန်ကန်တဲ့ဥပဒေမူဘောင်ကိုဖော်ထုတ်ချင်တယ်၊ တခြားနေရာတွေလည်းရှိတယ်၊ ဒင်းဗားမှာရှိတဲ့ Kevin ကိုကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။ သူသည်ပြစ်မှုထင်ရှားမှုမရှိသောဒင်းဗားကို ဦး ဆောင်ရာတွင်ကြီးမားသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီး Oakland ရှိယောက်ျားများနှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ ငါတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတကယ်စကားပြောပြီးသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ယခုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအသိအမြင်မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှအချို့သောဥပဒေပြုခြင်းများကိုထုတ်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်သည်မတော်လျော်ပါ၊ ကျွန်ုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်မှာတိုင်းပြည်အတွင်း၊ ဖလိုရီဒီးယားလူမျိုးများအကြားအသိအမြင်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ငါတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရနိုင်ဖို့ပါ
ကောင်းပြီ၊ အရမ်းခက်တယ် ကျွန်တော်တို့ဟာစက်ရုံတစ်ခုသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုလိုမျိုးမြှင့်တင်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ဒါက“ ဟေ့ကလေးတွေ၊ ရှေ့ဆက်သွားပြီးပေါင်းပင်တချို့ကိုဆေးလိပ်သောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါကတော့တခြားဘယ်သူ့ရဲ့ fuck ဆိုတဲ့ကလေးတွေအတွက်မဆိုတာ ၀ န်မထမ်းချင်ဘူး၊ ပေါင်းပင်ဆေးလိပ်သောက်ရန်ပြောပါ ငါကအန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်၊ ငါတကယ်ကို fuck ဆိုတဲ့မပေးဘူး သူတို့လိုပဲ။
ငါတကယ်အသက်အရွယ်နိမ့်ဆုံးရှိခြင်း၏ထောက်ခံသူတွေပါပဲ။ ငါဒီဆေးတွေကိုနုပျိုတဲ့ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်ယူမယ်ဆိုရင်ငါထင်တယ်၊ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကအလုံအလောက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလို့မထင်ဘူး။ သို့သော်လူကြီးတစ်ယောက်အနေဖြင့်၊ သင်သည်ဤဆေးဝါးများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် MDMA သောက်သည်ဖြစ်စေ၊ သောက်နေလျှင် MDMA သည် PTSD၊ psilocybin မှိုများနှင့်အတူအထောက်အကူပြုသည့်အထောက်အထားများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်လျှင်မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မှန်ကန်သောနားလည်မှုဖြင့်ယူဆောင်လာပါက၎င်းတို့သည်ဆေးဖက်ဝင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကိုအလွဲသုံးစားပြုခဲ့ရင်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့စကားပြောရုံအရေးကြီးတယ်။
ဖလော်ရီဒါရှိဆေးခြောက်ဥပဒေများသို့မဟုတ်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုသင်ကလူတို့အား၎င်းတို့အပေါ်တစ်စုံတစ်ရာသောခံစားချက်ဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောပြissueနာအပေါ်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု၊ ကိုယ်တွေ့အသိပညာ၊ တစ်စုံတစ် ဦး က“ မဟုတ်ဘူး၊ ငါမထောက်ခံဘူး။ ဘာမှမလိုချင်ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတစ်ခုခုကိုမေးခွန်းထုတ်စရာလိုမျိုးခံစားမိစေမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုဖန်တီးစရာမလိုပါဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်ခါမှမတည်ရှိဖူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပစ်ရမယ်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာဒေါ်လာသန်း ၅၀ ရှိဖို့လိုတဲ့ Florida ကိုဒီဆေးခြောက်အသစ်သောဆေးခြောက်ဥပဒေများကိုရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Illinois မှာလိုင်စင် ၇၅ ခုအတွက်လျှောက်လွှာ ၄၀၀၀ ရှိပါတယ်။ လူတွေကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ကိုတရားစွဲမယ်၊ လိုင်စင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့နာကျင်မှုကြီးထွားလာတာကကျွန်တော်တို့ဟာဥပဒေပြုရေးအပြောင်းအလဲရှိအောင်သေချာအောင်လုပ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဆိုလိုတာကစက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လွယ်လွယ်ကူကူပဲ။ အလွယ်ကူဆုံးအရာက“ ဘယ်သူမှမဖမ်းဆီးပါနဲ့” ဟုပြောရုံသာဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ဒါကဖလော်ရီဒါမှာမြူနီစီပယ်တွေဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့တူတယ်။ သူတို့သည်ဆေးညွှန်းဌာနကိုတားမြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအရခွင့်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ထဲကတော်တော်များများက“ ငါတို့ထုံးစံမှာဥပဒေမူဘောင်တွေဘယ်လိုရှိသင့်သလဲဆိုတာကိုငါတို့မလာချင်ဘူး။ '' သူတို့ကိုဖလော်ရီဒါဥပဒေ ၃၈၁.၉၈၆ အရပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတယ် '' ဟုပြောသောတွန်းလှည်းတစ်စီးရရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ” Boom, ငါတို့ပြီးပြီ။ ငါတို့စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ အခြားမြူနီစီပယ်ကထွက်တွက်ဆကြကုန်အံ့။ သူတို့ကလက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းတွေပါ။ သူတို့သူတို့လုပ်တာကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်မယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်လိုပဲအခြားမြူနီစီပယ်တွေလိုပဲပြည်နယ်တွေကိုစမ်းသပ်ခန်းဓာတ်ခွဲခန်းတွေလုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကအခုဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။
ကောင်းပြီ၊ ဆိုလိုတာကတော့၊ ပြည်နယ်များမှာဒီဟာကိုကောင်းတဲ့ဘာသာစကားတွေအများကြီးရှိတယ်၊ အဲဒီမှာမကောင်းတဲ့ဘာသာစကားတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါအနည်းဆုံးပြည်နယ်အတိုင်းအတာအထိလေးစားလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်အနည်းဆုံးအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ရှေ့မှောက်သို့ရွေ့လျားနေသည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်သည်။ လူတွေရဲ့ပြည်နယ်အက်ဥပဒေကိုလူတွေနားမလည်တာကဒါကတကယ်တော့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံအားဖြင့်ပြဌာန်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဆန်းစစ်လေ့လာမှုသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြားလိုသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖက်ဒရယ်ဥပဒေကိုယူပြီးပြည်နယ်ဥပဒေတွေမှာပြugsနာဖြစ်စေတယ်။ ဒီတော့အခုမင်းကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုမတူတဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဆက်ဆံနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ Indiana မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ငါဟာရာဇ ၀ တ်သားဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ဒီကျွန်ပြည်နယ်ပြ,နာကိုလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်ပြfree္ဌာန်းလိုက်တယ်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်စနစ်မဟုတ်ပါ၊ ရာဇ ၀ တ်မှုပြည်နယ်များပါ၊ သို့သော်သင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်နိုင်လျှင်၊ ၁၃ ပြင်ဆင်ချက်အရသူတို့ကိုကျွန်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်လူတွေကပြည်နယ်အပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေမတူညီတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဥပဒေကိုဖန်တီးပေးတယ်။
[inaudible 00:42:48] ဟုတ်တယ်၊ ငါကရှေ့နေတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး၊ ငါကဒီမှာပညာရှင်ပဲ။ ဒါကြောင့်ပြည်နယ်အခွန်ကဲ့သို့ပင်ဆေးခြောက်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ကဲ့သို့ "အိုကေ၊ ငါတို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ကြလိမ့်မည်" အချို့သောအလေ့အထများမှာ၎င်းတွင်မရှိသကဲ့သို့၎င်းသည်တရားဝင်တရား ၀ င်တရားမ ၀ င်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဖြစ်ဝေးကြောင်းပြissueနာအဖြစ်, သို့သော်မည်မျှအခြားကဲ့သို့သောပြissuesနာများကို America မှာတည်ရှိ?
ကလေးငယ်ရဲ့ဆိုးတာကိုငါတို့အားလုံးသဘောတူနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီညင်သာပျော့ပျောင်းတဲ့အပင်ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုငါတို့မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒါကပြproblemနာပါ။ ငါတို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အရမ်းနက်ရှိုင်းတဲ့မေးခွန်းတွေရှိရင်သူတို့ကစော်ကားလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းရမည့်မေးခွန်းအချို့ရှိသော်လည်းဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုထားပြီးဖြစ်သည်။ ငါတို့တွေကြီးလွန်းနေတယ်၊ ​​အရာရာတိုင်းကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်၊ တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ပညာပေးဖို့လိုတယ်၊ ငါတို့တွေအရမ်းသောက်နေတာဟာမကောင်းဘူး၊ ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်။ သင်တို့မူကား
ငါနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေအကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အရမ်းခက်တယ်ဆိုတာပဲ။ သူတို့ကအချိန်တော်တော်ကြာတယ်။ သူတို့မှာဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ရှိတယ်၊ သူတို့မှာရှယ်ယာရှင်တွေရှိတယ်၊ မင်းကကုမ္ပဏီငယ်လေးတွေအကြောင်းပြောရင်မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်။ ပြည်နယ်များနှင့်ဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်အလှည့်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်ကြီးမားသောသင်္ဘောတစ်စင်းဖြစ်ပြီးသူတို့ကအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သလောက်အပြည့်အဝအလှည့်အပြောင်းမလုပ်နိုင်ပါ။
ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီကလေးငယ်တွေကိုလှမ်းယူပြီးပြtheနာကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတွန်းပို့နေတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကတော့ဒီဖက်ဒရယ်ဆေးခြောက်တားမြစ်ခြင်းကိုစွန့်လွှတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ သင်္ဘောကြီးကကြီးမားပြီးရွှေ့ဖို့အရမ်းခက်တယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆေးခြောက်ဥပဒေကိုကျင့်သုံးတာပေါ့။ ဒါကြောင့်ငါလိုငါနဲ့ငါသောမတ်စ်လိုငါထင်တယ်။ မင်းကဆေးခြောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတာလား၊ လူတွေကိုဆေးခြောက်နဲ့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတကယ်သိတဲ့ရှေ့နေတစ်ယောက်နဲ့မဆက်ဆံဘူးဆိုတာလူတွေကိုငါပြောရင်အရေးကြီးတယ်။ ခင်ဗျားဟာချည်နှောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံရတော့မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့မတူလို့ပါ။ လူများသည်၎င်းကိုအပန်းဖြေပြည်နယ်များရှိအရက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အရက်မဟုတ်ပါ။ ပိုနက်တယ်။
ဇော်ပိုင်။ ဆိုလိုသည်မှာ Keith Stroup သည်သူ့အကြောင်းပုံမှန်ဥပဒေရေးရာအကြံပေးထံအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့လိုက်သည်။ သို့သော်သူသည်ဆေးခြောက်နှင့်သူ၏ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုသဘောကျသောသဘောဖြင့်ရာဇ ၀ တ်မှုကာကွယ်ရေးရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအသံကျယ်ကျယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ သူတို့ကအဲဒါကိုစိတ်အားထက်သန်စွာခေါ်ဝေါ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်၊ သူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကပြစ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊
Roddy ။ ငါထင်တာကတော့သူဟာတရားရုံးမှာဆေးခြောက်ကိုယ်ကျင့်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့သူ့ကိုယ်သူတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ ဒါပေမယ့်သူဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမျိုးသားသတင်းလိုမျိုးအဲဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကာကွယ်ဖို့သူ့ကိုရွေးခဲ့တယ်။ ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကပိုက်ဆံပဲ။
Check ပြီးတော့ဒါကြောင့်အရာပါပဲ။ အကယ်၍ သူသည်သူရရှိသောပိုက်ဆံကိုယူကရိန်းမှမရိုင်းစိုင်းစွာကောက်ယူပြီးသူသည် Sly သို့ဖြစ်စေ၊ သူ၏အမည်နှင့်ဖြစ်စေပေးချေလျှင်၎င်းသည်၎င်းကိုသူ၏ဘဏ်သို့ယူ သွား၍ အပ်လိုက်သည်။ သူဟာ MRB ဒုတိယဆင့်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကသူ့ကိုမထုတ်နိုင်ကြဘူး။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်ကြိုးစားရန်ကြိုးစားပါကကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်ကကျွန်ုပ်အား ၅၀ ပေးသောအနေဖြင့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ကိုတရားစွဲရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ကိုကောင်းစွာ ပေး၍ လိုင်စင်ကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က“ မဟုတ်ဘူး၊ မင်းမြင်တာနဲ့ကွဲပြားတာပဲ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကရာဇ ၀ တ်မှုအတွက်ခုခံကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကလူတစ်ယောက်ကိုရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ဖို့ခုခံကာကွယ်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာ MRB ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တယ်။ ”
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို။ ဟာဆေးခြောက်နေရာကရှေ့နေတွေလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကကျွန်တော်တို။ တကယ်လို့သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို။ ရဲ။ နည်းပညာကိုရဲ။ ရဲ။ ခုခံကာကွယ်သူဆိုရင်မင်းကိုရာဇ ၀ တ်သူကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆေးခြောက်ဟာတရား ၀ င်တရားမ ၀ င်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ၊ အကယ်၍ သင်သည်ဆေးခြောက်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ကြိုးစားနေပြီး M&A သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ခြံမြေသဘောတူညီမှုကိုလုပ်နေသည်။
နားလည်ရန်၊ သင်၏ယောက်ျားများသည်လိုအပ်မှု၊ Tom နှင့်သင်၏ Dustin တို့၏စီးပွားရေးအရှိန်အ ၀ ါသည်အမေရိကရှိကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးကိုမည်သို့နိဂုံးချုပ်နိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ပြဖြစ်သည်။ ဒါဟာငါတို့ရဲ့ကန်ထရိုက်စာချုပ်တွေ၊ မကြိုက်ဘူး
ဟုတ်တယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကိုပြည်နယ်ရဲ့ [inaudible 00:47:49] အကြောင်းပြန်ပြောဖို့အတွက်အခုဆိုရင်တချို့နိုင်ငံတွေဟာရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောအရာသည်ဤ MSOs များ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသောနိုင်ငံစုံအော်ပရေတာများအခြေအနေဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့လိုက်နာရန်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနှင့် SOP အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အရမ်းထိရောက်မှုမရှိဘူး ထို့ကြောင့်ငါဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းစံနှုန်းဖြစ်သော ASTM D37 တွင်အလွန်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုမည်သို့စမ်းသပ်ရမည်၊ မည်သို့တံဆိပ်ကပ်ရမည်၊ မည်သို့ထုပ်ပိုးရမည်၊ မည်သို့စွန့်ပစ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများမရောက်မှီတိုင်အောင်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စံသတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းများမလုပ်မချင်းစက်မှုလုပ်ငန်းသည်အလွန်ထိရောက်မှုမရှိတော့ဘဲဤဆေးခြောက်ကုမ္ပဏီများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်အလွန်မြင့်မားနေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်လည်းခင်ဗျားတို့မြင်နေတဲ့ဒီစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းအချို့ဟာအကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ပြောနေတာကျဆင်းနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်တရားမျှတသည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့လိုက်လျောညီထွေမှုရှိရန်အလွန်အမင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုမည်သူမျှကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ မင်းတို့မယုံနိုင်ဘူး၊ “ ဟေ့ဒါတွေငါတို့တံဆိပ်တွေပေါ့၊ ငါတို့တိုင်းပြည်တိုင်းမှာရောင်းတော့မယ်” မဟုတ်ပါ၊ သင် MSO ဖြစ်သည့်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီတွင်ပြည်နယ်တိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်များရှိပြီးမည်သည့်အရာကိုခန့်မှန်းရန်လိုသနည်း။ ထိုတံဆိပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်ဥပဒေရေးရာအပြောင်းအလဲကိုမဆိုသင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီတွင်ဥပဒေသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မဝယ်ပါနဲ့၊ ၁၀၀၀၀၀ တံဆိပ်ကပ်လို့မသွားပါနဲ့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ့မှာတစ်ပြားမှတစ်ချပ်လောက်သိမ်းလို့ရတော့မယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာလည်းပြောင်းမယ်။ ဒါကြောင့်စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေသည်။
ဟုတ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီသည်ကိုယ်ပိုင်အရာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မင်းမှာ supply supply တစ်ခုရှိရမယ်၊ supply chain ကပြည်နယ်တစ်ခုပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်ကုန်အားလုံးဟာအထူးပြည်နယ်တစ်ခုမှာစိုက်ပျိုးရလို့ပဲ။ ဒါ့ကြောင့်ဒီ MSOs တွေအတွက်နိုင်ငံအလိုက်အော်ပရေတာတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်စီးပွားရေးကိုမှချဲ့ထွင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါဆိုရင်သင်လုပ်နိုင်တာကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်ပိုများတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဆေးခြောက်ကစားနေသူတစ်ယောက်ယောက်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်၊ သင်ဟာငွေအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ရမယ်၊ မင်းကမင်းကမင်းကိုငွေရှာနေတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်သူတို့ကမင်းရဲ့စျေးနှုန်းတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်။ လက်သီးလက်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှာစိုက်ပျိုးသူများအတွက်နံပါတ်တွေအကြောင်းပြောပြီးသူတို့ဘယ်လိုငွေစီး ၀ င်ငွေကိုထုတ်ပစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကငွေသားစီးကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်ငွေအမြောက်အများစီးဆင်းနိုင်လို့ပဲသင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တောင်ရရှိရင်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အကုန်အကျမများပါဘူး။ ဒီအရာအားလုံးဟာပြproblemsနာတွေဖြစ်စေတယ်။
ဒါပေမယ့်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာငါတို့ပူးပေါင်းသင့်တဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ဆေးခြောက်ယူနီဖောင်းစီးပွားရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုဒ်နံပါတ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဆေးခြောက်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကုဒ်တစ်ခု၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အခြားသောဥပဒေများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ERA သည်ထို ၃၈ ခုပြည်နယ်သို့ရောက်သွားသည်။ ဒါဟာလက်ျာ, 38 အတွက်လွန်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာငါတို့အဲဒီမှာရှိတယ်၊ ငါထင်တယ်၊ ဒါက ၁၇၈၉ ခုနှစ်မှာ ၂၅ ကြိမ်မြောက်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အထိကိန်းဂဏန်းကိုအမှန်အတိုင်းပြဌာန်းခဲ့တယ်။ ငါမသိဘူး၊ ငါဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပညာရှင်မဟုတ်ဘူး၊
ဟုတ်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမင်းရဲ့ဘဝနဲ့သက်ဆိုင်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေပါတယ် အဲဒါကဒါကိုငါနှစ်သက်တာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသမိုင်း ၀ င်ပြandနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘာမှမတူဘဲပြdifferentနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းမှာ applications အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးသာမကလိုက်လျောညီထွေမှု၊ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေသာမကဘဲဒီအရာအားလုံးကိုထိမိပြီးစိတ်ဝင်စားစရာပါ။
နောက်ပြီးပြန်လှည့်ပတ်ချင်တဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖလော်ရီဒါမှာ THC နိမ့်ကျတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာဆေးလိပ်သောက်တဲ့ပန်းတွေမရှိခဲ့ဘူး၊ နောက်ဆုံးဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှာပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ အခုငါတို့မှာဆေးလိပ်သောက်တဲ့ပန်းပွင့်တွေရှိတယ်။ အခုငါလိုင်စင်ရသူတွေကအဲဒါကိုအလုံအလောက်မထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါပြောမယ်။
... မည်သူမဆိုပန်းဝယ်လိုအားခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။ လူတိုင်းကပန်းများ၊ ပန်းပွင့်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိကြသည်။
Dude, ဒါဆိုမင်းကနံပါတ်တွေအကြောင်းပြောနေတာနဲ့တူတယ်၊ ဆေးခြောက်များအတွက်စျေးကွက်ကြီးမားသည်။ သင်ယောက်ျားများသည်ထုတ်လုပ်သူ ၄ ဦး နှင့်စတင်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်သည်သင်၏ယဉ်ကျေးမှု၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်၏စားသုံးသူအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်လူအများ၊ ကွဲပြားမှု၊ အတွေ့အကြုံပိုများလာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရာ၊ ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်အပျက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသည်။ အဲဒီမှာဖြစ်မယ့်သူတစ်စုံတစ်ယောက် ... သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် whatnot နှင့်အတူသင်စကားပြောတူသောအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးအရာအားလုံးဖြစ်ပျက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ဒါကတကယ့်ကိုအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ပါ။ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကွဲအက်တာတွေလုပ်နိုင်တာကြောင့်ဒီအထောက်အပံ့တွေကိုရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကငါကဖလော်ရီဒါရှေ့နေမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအဲဒါကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါအစဉ်အဆက်တစ် ဦး ဖလော်ရီဒါဘားစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ရည်ရွယ်ထားကြဘူး။ အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ပြီးရင်ဥပဒေပြုရေးကအဲဒါကိုစပြီးပြုပြင်တာလား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကပြင်ဆင်ချက်က“ THC နည်းတယ်၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရသေးဘူး” လို့ပြောတယ်။ ယခုတွင်သူတို့သည်အနိမ့် THC နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ရသောပန်းပွင့်ရှုထောင့်ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းမတိုင်မှီ THC သည်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်သည် ၀ င်ရောက်ပြီး THC ထုတ်ကုန်ကိုအမှန်တကယ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်ဆေးလိပ်သောက်သူနှင့် ပတ်သက်၍ တိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့သော်လည်း၎င်းမှတစ်ဆင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရသည်။ သို့သော်တရားစွဲဆိုမှုများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုများမှတဆင့်အခြေခံအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်လာသောအခါသူသည်ဆေးလိပ်သောက်သုံးသည့်ဆေးခြောက်ကိုထောက်ခံသူမူဝါဒချမှတ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကခွင့်ပြုပါရန်အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော။
THC ဦး ထုပ်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောငြင်းခုံမှုများရှိခဲ့သည်။ နောက်လာမည့်ဥပဒေပြုရေးဆွေးနွေးပွဲတွင်ကျွန်ုပ်နားလည်ထားသည့်အရာကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်အစီအစဉ်တွင် THC ဦး ထုပ်ဆောင်းရန်ကြိုးစားရန်နောက်ထပ်တွန်းအားတစ်ခုရှိသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကြောင်း, သောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်လည်းငါတို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေရတော့တယ်။ ဒါကြောင့်အခုသူတို့ကဖလော်ရီဒါမှာမြင့်မားသော THC ဆေးခြောက်သုံးခွင့်ပြုသည်။ ဒါပေမယ့် [crosstalk 00:53:38] -
မင်းယောက်ျားတွေမှာ vape တံဆိပ်တွေလိုမျိုးရှိလား အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျန်းမာရေးအတွက်သဘာဝ၏ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် ၈၀% ခန့်တွင် cannabinoids ဖြစ်နိုင်သည်။
yeap, ငါတို့ vape ခြံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိသောအရာသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမိန့်ကိုစားရန်အတွက်ခွင့်ပြုထားသည်။ Ag ၏ဌာနနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးဌာနသည်စားသုံးနိုင်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်လက်ရှိဖလော်ရီဒါမှာစားစရာတွေမရှိဘူး၊ ငါထင်တာကလူအများစုကစားစရာတွေပိုကြိုက်တယ်၊ ငါတို့လူနာတွေဟာစားစရာတွေကိုလက်လှမ်းမမှီတာကံဆိုးတာပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေဆဲဖြစ်သောဖလော်ရီဒါတွင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအရာတစ်ခုမှာသူတို့သည်ဖလော်ရီဒါရှိမည်သည့်တတိယပါတီစမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်းကိုမှအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါ။
ဟုတ်တယ်၊ ငါဖလော်ရီဒါရှိစမ်းသပ်ခန်းများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သော Green Scientific Labs ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကကျန်းမာရေးဌာနသည်တတိယပါတီစစ်ဆေးမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုထုတ်မထုတ်သေးဘူး။ အခုသူတို့ကအရေးပေါ်စည်းမျဉ်းကိုထုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်အခုတတိယပါတီစမ်းသပ်ခန်းတွေဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကဆေးခြောက်ကိုစာချုပ်နဲ့သာကိုင်တွယ်ခွင့်ပေးတယ်။ တတိယပါတီစစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းများ၌လိုင်စင်မရှိပါ။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် MMTC၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ဆေးကုသမှုစင်တာနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်လိုသည်။ အတော်အတန်ရိုးသားစွာပြောရလျှင်ယခုဖလော်ရီဒါတွင်စမ်းသပ်မှုသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
[crosstalk 00:55:05] ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ၊ ခင်ဗျားက FAA နဲ့ဆက်ဆံရတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့မှာမရှိတဲ့နေရာမှာအီလီနွိုက်စမှာပေါ်လာတယ်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ကစမ်းသပ်မှုအကြောင်းပြောတယ်။ စမ်းသပ်ခန်းများရှိသော်လည်းစမ်းသပ်ခန်းအသစ်များအတွက်တံခါးမဖွင့်သေးပါ။ သူတို့ကဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်လား။
အထူးသဖြင့် [inaudible 00:55:37] လမ်း၊ ဒါဟာပြန်လာပြီး "အိုး၊ မင်းအဲဒါကိုစုစည်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့သုံးတာလား" “ အင်း”
ကောင်းပြီ၊ ငါသာမေးနိုင်သောမေးခွန်းများမှာ“ ဘာကြောင့်လဲ? ဒီကန့်သတ်ချက်တွေရှိဖို့ရုတ်တရက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ”
ဟုတ်တယ် ကောင်းပြီ၊ အဲဒီမှာ ... ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကလူတွေ၊ ဆရာဝန်တွေအများကြီး၊ ဆေးခြောက်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်နယ်ပြင်ပမှကစားသမားတွေအများကြီးကိုခေါ်လာပြီး Tallahassee မှာစပီကာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီမှာထွက်သွား။ ဒီဆရာဝန်များကအခြေခံအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသော THC ကန့်သတ်ချက်များ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းပြောဆိုနေသည့်သတင်းအချက်အလက်အစည်းအဝေးများနှင့်ကြားနာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါပြောမယ်ပြောတာကငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်များစွာနဲ့ဒေါသအများကြီးထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့သင်သိပြီ၊ ယခုသူတို့သည်သူတို့သည်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများစတင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိုမိုမြင့်မားသော THC ကိုအမှန်တကယ်လက်လှမ်းမီရန်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။
အခုတော့အတော်လေးရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲ…သူတို့ THC ပမာဏကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်လုပ်ရမယ်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်အချက်များမှာမျိုးကွဲများနှင့်၎င်းတို့သည်ယခုအချိန်တွင်ကြီးထွားလာသောဇီဝမျိုးကွဲများအားလုံးသို့မဟုတ်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများတွင်မြင့်မားသော THC အတွက်ဖြစ်သည်လော။ ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင် Florida ကုမ္ပဏီတွေဟာအမှားအယွင်းတွေရော၊ အမျိုးမျိုးသောကိစ္စရပ်တွေကိုပါဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။ ဖလော်ရီဒါကုမ္ပဏီတွေဟာအမှားအယွင်းတွေအားလုံးကိုပြန်ပြုပြင်ရမယ်။ ငါမျှော်လင့်ပါတယ်
မဟုတ်ပါ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Ethan Russo ဒေါက်တာ Russo ကိုလေထဲတွင်ပျံသန်းပါကသူက "မဟုတ်ပါ၊ ဆေးခြောက်အဆင့်ဆင့် Chemovar" ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အဲဒါဟာအဲဒီမျှတမှုရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမှာသင့်ရဲ့ lifter strains များကဲ့သို့များသောအားဖြင့်သင့် CBD လျှော်ကဲ့သို့သော 20 to one ratio ရှိသည်။ ပြီးတော့မင်းမှာဆန့်ကျင်ဘက်အချိုးရှိတယ်၊ တခါတရံမှာသူက THC အားလုံးပဲ။ ပြီးတော့သင် Gorilla ကော်နဲ့တူလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သင်က Gorilla lifter လိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် THC CBD အချိုးညီမျှမှုရှိသင့်တယ်။ ပြီးတော့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်နိုင်ရင်မင်းပန်းပွင့်ကိုကြည့်ရ ဦး မယ်။ ဒါဆိုပြီးပြီ၊ သင်ရပြီဆိုရင်သင်အခုမရင့်တဲ့အချိန်မှာပန်းသီးအားလုံးကိုရွေးရမယ်လို့ပြောတာနဲ့တူတယ်။
ငါသာပိုဆေးလိပ်သောက်လိမ့်မယ်အဘယျသို့ပုံပါဘဲ။ သငျသညျ 10% THC ဆေးခြောက်အကြောင်းပိုမိုပြောသောဆိုပါကသင်ကဆေးခြောက်ကိုပိုမိုသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ရုံပိုက်ဆံပိုမိုသုံးစွဲဖို့ရတယ်။ ဒါကြောင့်သူကစားသုံးသူကိုစိတ်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဆေးခြောက် ၀ ယ်ဖို့လိုတဲ့လူကိုရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။
လိုင်စင်ရသူ (၂၂) ယောက်ကအိမ်မှာကြီးထွားလာတာကိုလိုချင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။
ကြည့်ပါ၊ ငါမသိဘူး ဒါပေမယ့်တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးတဲ့အခါဒီလိုင်စင်ရသူ ၂၂ ယောက်ကငါပြောသလိုဖလော်ရီဒါမှာကြီးမားတဲ့စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဤလိုင်စင်ရသူ (၂၂) ဦး သည်သူတို့နောက်တွင်ငွေအမြောက်အများရှိပြီး Tallahassee ရှိလော်ဘီသမားများစွာသည်သူတို့၏အကျိုးအတွက်စည်းရုံးနေကြသည်။ ဒီတော့ဒါကသင်ကျော်လွှားရမယ့်အခက်အခဲကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုင်စင်ရသူ ၂၂ ယောက်ကိုအိမ်မှာနေဖို့အိမ်တွေကိုကြီးထွားအောင်လှုံ့ဆော်ဖို့ဒေါ်လာတွေအများကြီးသုံးနေရတော့မယ်ဆိုတာပါပဲ [inaudible 22:22:22] ။ ယခုကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ၊ လိုင်စင်ရသူများကိုယ်စားပြောဆိုရန်မလိုပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ထဲကအချို့ကထောက်ခံမှု၌ရှိကြ၏။ သို့သော်ကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းတို့သည်အရွယ်ရောက်အိမ်သို့ဆန့်ကျင်သောအနေအထားမျိုးရှိလိမ့်မည်။
မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ယောက်ျားတွေဟာအပန်းဖြေမှုကခရီးသွားလုပ်ငန်းဒေါ်လာဆီကို ဦး တည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထောက်ပြတဲ့အတွက်ပိုက်ဆံအများကြီးဆုံးရှုံးနေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုသင့်ရဲ့ဆေးကုသမှုက ၁၀၀% အာမခံထားလို့ပါ။ ဆိုလိုတာကသူတို့ကလွှဲလို့ခေါ်တာ၊ ပြည်နယ်မှထွက်ခွာခြင်း၊ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝယ်ယူမှုတွေအများကြီးဒေသခံနေထိုင်သူများ, ဆေးဘက်မဟုတ်သောလူနာသွားကြသည်ကိုအာမခံပါသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့အပန်းဖြေဖို့အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝယ်ယူမှုဒါမှမဟုတ်အပန်းဖြေမှုဝယ်ယူတာနဲ့ချက်ချင်းပဲသူဟာလူမည်းစျေးကွက်လို့ခေါ်တဲ့သူကိုဆွဲဆောင်တော့မှာပါ၊ ဒါပေမယ့်သူကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာပါ။ သင်စျေးကွက်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုမရသေးပါ။ မင်းတို့ယောက်ျားတွေလိုပဲခရီးသွားတာကိုနှောင့်နှေးကြတာပဲလိုမင်းလိုပဲ၊
အိုးဒါအရူးပဲ ဆိုလိုတာက၊ ဒီလူတွေကဒီနေရာမှာလိုင်စင်ကိုဒီလောက်ပိုက်ဆံတွေသုံးနေကြတယ်ဟုတ်လား။ ဆိုလိုတာကလူနာ ၃၀၀,၀၀၀ အတွက်သူတို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာလူ ဦး ရေသန်း ၂၀ အတွက်ငါတို့လုပ်နေတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီလူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ သူတို့မှာလူနာ ၃၀၀၀၀၀ ကို ၀ င်ခွင့်ရမယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်စက္ကူတစ်ရွက်ကိုဒေါ်လာသန်း ၅၀ နဲ့ချက်လက်မှတ်ထိုးတဲ့လူတွေမရှိဘူး။ ဖလော်ရီဒါမှာအပန်းဖြေမှုဖြစ်တဲ့အခါကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေ့မြင်လို့ပါ။ အတော်လေးရိုးသားစွာပြောရရင်တော့ဒါဟာလူဆိုးဂိုဏ်းဝင်တွေဖြစ်လာမှာပါ။
အများကြီးလုပ်ရမယ့်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှိတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။ ငါဆိုလိုချင်တာသိလား? ကြည့်ပါ၊ တစ်နေ့တာကုန်သွားပြီ၊ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ခင်ဗျားယောက်ျားတွေကိုတတ်နိုင်ရမယ်၊ လူတွေအများကြီးကိုပြောတယ်၊ သူတို့ကဒီလုပ်ငန်းကို ၀ င်ချင်ကြတယ်၊ ငွေလွယ်တယ်လို့သူတို့ထင်တယ်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့တူရဲ့။ သငျသညျစမတ်ဖြစ်ရတယ်။ သူတို့လုပ်နေတာကိုသိတဲ့လူများ၊ မှန်ကန်သောရှေ့နေများ၊ မှန်ကန်သောစာရင်းကိုင်များ၊ သင့်တော်သောဘဏ္financeာရေး ၀ န်ထမ်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ရမယ့်သူတွေနဲ့သင်အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ ရုံအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုပဲ။ တစ်ကောင်လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ
ငါတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်၊ ကောင်းတယ်၊ ဒီတော့ Dustin, 2020 ခုနှစ်တွင်ဖလော်ရီဒါဆေးခြောက်အဘို့, သငျသညျမျိုးဘယ်လိုဖြစ်ပျက်မြင်သနည်း
ကောင်းပြီ, 2020 ခုနှစ်တွင်ဖလော်ရီဒါဆေးခြောက်? ဒါကြောင့်အခုငါတို့တရားရုံးချုပ်အမှုဖြစ်ပျက်နေတယ်။ ငါတို့မှာငါပြောခဲ့တဲ့ဥပဒေကြမ်းလည်းရှိတယ်။ ကျွန်တော်ငွေတောင်းခံလွှာဖြတ်သန်းနေတာကိုမမြင်ပါဘူး ငါမျှော်လင့်တယ်၊ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်၊ ငါတို့ဒီမှာအပန်းဖြေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ငွေတောင်းခံလွှာဖြတ်သန်းနေတာကိုမမြင်ပါဘူး ဖလော်ရီဒါတရားရုံးချုပ်ကဒီကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်အထိဥပဒေပြုသူဘာမှမလုပ်ဘူး။ အမှုက၎င်းသည် Florida Grown ကိစ္စဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပဲ။ လာမယ့်လအနည်းငယ်မှာတရားရုံးချုပ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်တယ်။ ဥပဒေပြုသူသည်အထူးအစည်းအဝေးသို့ပြန်သွားရန်လိုလိမ့်မည်။ သူတို့ကပြဌာန်းချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်အချိန်မည်မျှကြာနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။
ထိုအခါ DOH သည်စည်းမျဉ်းအသစ်များကိုထုတ်ပြန်ရလိမ့်မည်။ ထို့နောက် DOH သည်လျှောက်လွှာများကိုထုတ်ရမည်။ ပြီးတော့သူတို့ကလျှောက်လွှာကိုလက်ခံစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ ၂၀၂၀ မှာလိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့အလွန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ မှာလိုင်စင်တွေထုတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အရမ်းသံသယဝင်နေပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာအနည်းဆုံး 2020 ။
ဒါပေမဲ့လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ ငါပြောသလိုပဲ၊ တတိယပါတီစမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှာငါထွက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ဒီတတိယပါတီစမ်းသပ်ခန်းအချို့ကိုလိုင်စင်ချထားပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ထိုအခါနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လှည့်ပါကလူနာနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ငါလူနာသူတို့ရနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ရချင်တယ်။ အကယ်၍ ဤထုတ်ကုန်သည်စမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုနည်းနည်းမဖြစ်လျှင်ဖလော်ရီဒါဈေးကွက်သို့တင်ပို့သောဤထုတ်ကုန်အချို့ကိုအပြည့်အဝစမ်းသပ်ခြင်းမပြုနိုင်သည့်အန္တရာယ်များစွာရှိသည်။
ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းတစ်ခုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ [crosstalk 01:02:36] ဒါဆိုလူတွေကမင်းကိုဘယ်မှာရှာတွေ့နိုင်မလဲ။
ကောင်းပါတယ် ကောင်းပြီ၊ ငါပြပွဲတက်လာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် [crosstalk 01:02:55] ဖလော်ရီဒါသည်အသစ်သောအရာများဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှပြန်လာပြီးမျှဝေပါ။